Uhlu lwezidakamizwa ze-hypoglycemic kanye nokusetshenziswa kwazo > Ukwelashwa nokuvimbela
Izidakamizwa ze-Hypoglycemic: isibuyekezo sabenzeli be-hypoglycemic agents
Phezu kwe-insulin, esebenza ngabazali emzimbeni wesiguli, kunezidakamizwa ezinomphumela we-hypoglycemic lapho zithathwa ngomlomo. Zisetshenziswa ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2.
Izidakamizwa ezinomphumela we-hypoglycemic wokuphathwa komlomo zihlukaniswe ngamaqembu:
i-alpha glucosidase inhibitors,
Kunezizukulwane eziningana zokutholakala kwe-sulfonylurea:
Isizukulwane sokuqala - Carbutamide, Tolbutamide, Chlorpropamide kanye Acetohexamide,
Isizukulwane sesibili - Glibenclamide, Glibornururil, Gliclazide, Glisoxepide, Glycvidone neGlipizide,
Isizukulwane sesithathu - Glimepiride.
Isenzo sale mishanguzo sisuselwa ekuvuseleleni kwamaseli we-beta eziqhingini zeLangerhans zepancreas, esiza ukukhulisa ukukhishwa kwe-insulin yabo uqobo. Ngenxa yokuqala komphumela we-hypoglycemic, amaseli okwazi ukukhiqiza i-insulin kumele aqhubeke nokuhlala esiswini. Ezinye izidakamizwa zisiza ukukhulisa ukuzwela kwezicubu ezincike kuma-insulin ukuze zihambise i-insulin emzimbeni futhi kwehlise ukwenziwa kweglucose esibindini nasemafutheni. Lokhu kutholakala ngokuphindaphinda ama-insulin receptors athambile atholakala kumaseli kwelitshe futhi andise ukusebenzisana kwawo. Izidakamizwa zithinta ukukhiqizwa kwe-somatostatin ngokwandisa ukukhiqizwa kwayo, okuholela ekunciphiseni kokuhlanganiswa kwe-glucagon.
Izidakamizwa ezivela kuleli qembu zisetshenziselwa ukwelapha i-2 mellitus yesifo sikashukela nokudla okungasebenzi, lapho ifomu elithambile liba ngokulinganisela.
Yabelwa iziguli ezineminyaka ephakathi nendawo lapho kungekho zimpawu ze-ketoacidosis ne-anorexia, inkimbinkimbi nezifo ezihambisana nayo, ukwelashwa okubandakanya ukuphathwa kwe-insulin ngabazali. Azinqunyelwe uma isidingo sansuku zonke se-insulin singaphezulu kwama-40 amayunithi, inkambo enzima yesifo sikashukela, ukukhulelwa, i-ketosis kanye nomlando wesifo sikashukela. Futhi nge-hyperglycemia enkulu kune-13.9 mmol / l ne-glucosuria enzima, ngokuya ngokudla okunconyelwayo okwelapha.
Imiphumela emibi engaba khona:
umuzwa wokucanuzelelwa kwenhliziyo, ukuhlanza nohudo,
ukwehla kwenani lama-leukocytes namapuleti,
i-hemolytic kanye ne-aplastic anemia,
i-allergies yesikhumba - ukulunywa, i-erythema, kanye nesikhumba.
Ukusetshenziswa isikhathi eside kungaholela ekushabalaleni komphumela omuhle wokuqala ovuselelayo kumaseli we-beta. Ukuvimbela lokhu, kungahlanganiswa ne-insulin noma ukuthatha ikhefu ekwelashweni. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuyisele impendulo yamaseli we-beta ekwelashweni elithathiwe.
Namuhla, ukuqashwa kwezidakamizwa zesizukulwane sokuqala kusiyekelwa kancane kancane, ngoba ezinye izizukulwane zinethonya ngokwengeziwe lokwehlisa ushukela lapho kuthathwa imithamo ephansi, ubungozi bomphumela wecala bungaphansi. Isibonelo, esikhundleni se-2 g ngosuku lweTolbutamide, kukalwa i-0.02 g ye-Glibenclamide.
Umphumela obizwa ngokuthi yi-hypoglycemic uyabonakala lapho uthatha i-Glibenclamide, ngakho-ke kuyindinganiso ekuhloleni umphumela wokwehlisa ushukela wezidakamizwa ezintsha. Imunca ngokuphelele emathunjini ngesikhathi esifushane, ngakho-ke ichazwe ngemithamo emincane.
I-Glyclazide ayigcini nje ukwehlisa ushukela, kodwa futhi inomphumela onenzuzo kumngcele we-hematological kanye ne-rheology yegazi. Lokhu kuvimbela izinkinga zesifo sikashukela ezinjenge-retinopathy ne-thrombosis.
Ngenxa yokuphuma okhethweni ngamathumbu, i-Glycvidon imiselwe umsebenzi wezinso okhonjwe kahle.
Iqembu lama-meglitinides lifaka iRepaglinide neNateglinide.
I-Repaglinide isuselwa ku-benzoic acid, umphumela wayo wehlisela ushukela uyefana ne-sulfonylureas. Umphumela oholela phambili yi-hypoglycemia. Kusetshenziswa ngokuqapha uma kwenzeka umsebenzi wesibindi nokungajwayelekile wezinso.
I-Nateglinide isuselwa ku-D-phenylalanine, inomphumela ophansi wokusongela ushukela kodwa ongazinzi.
AmaBiguanides afaka iMetformin, iBuformin neFenformin. Isenzo se-biguanides sisekelwe ekunciphiseni ukwakheka kwe-glucose kumaseli wesibindi, okwandisa ukusetshenziswa kwayo kwezicubu kanye nokwenza ngcono ukubopha kwe-insulin kuma-receptors ahambisanayo. Ngasikhathi sinye, bavimbela ukwakheka kwe-glucose emafutheni, banciphisa ukumuncwa kwe-glucose emathunjini, bathuthukise imetabolism yamafutha futhi banciphise ukuqina kwamafutha aqukethe. Ngakho-ke, ekwelashweni nge-Biguanides, ukwehla kokudla kuyaphawulwa, okunomthelela ekunciphiseni isisindo.
Babekiwe uma kungekho umphumela wokudla nokudla okuphuma ku-sulfonylurea.
ukubekeka phansi kwe-myocardial,
ukusebenza kokuphazamiseka kwesibindi nezinso,
Ukuthatha i-biguanides kungaholela ekwakhiweni kwemiphumela emibi: ukubonakala kokunambitheka kwensimbi emgodleni womlomo, ukuphazamiseka kwesisu komgudu wokugaya ukudla, ukungezwani kwesikhumba, i-anemia, nabanye.
Ama-Thiazolidinediones afaka iPioglitazone, iCiglitazone, iTroglitazone, iRosglitazone ne-Englitazone. Isenzo sale mishanguzo sisuselwa ekwandiseni ukuzwela kwezicubu ukuze kufakwe i-insulin yangaphandle, kunciphise ukukhiqizwa kwama-lipid emisipha nasezinhlinini ze-adipose kanye nokukhululwa kweglucose esibindini.
I-Alpha-glucosidase inhibitors - i-Acarbose neMiglitol - inqanda inqubo yokukhiqizwa kwe-glucose emathunjini kusuka kuma-polysaccharides nama-oligosaccharides ekudleni. Lokhu kudala ukwehla kweshukela egazini. Ngenxa yalokhu, ama-carbohydrate adliwayo akhululwa angashintshiwe emzimbeni.
Ukuphathwa kwe-alpha-glucosidase inhibitors kungahle kuhambisane nokuphazamiseka kwe-dyspeptic ngenxa yokwephulwa kokugaya kanye nokufakwa kwe-carbohydrate, i-metabolism yayo eyenzeka emathunjini amakhulu. Ngalesi sizathu, ukwelashwa kuhambisana nokudla okuqinile, okusho ukukhawulelwa okubukhali kokudla okuyinkimbinkimbi kwe-carbohydrate.
Ama-ejenti wakamuva we-hypoglycemic angama-incretin mimetics, angama-analogues ama-incretin. Ama-insretin ama-hormone akhiqizwa amaseli akhethekile esibeleni ngemuva kokudla, anomthelela ovuselelayo ekukhiqizweni kwe-insulin endulin. Ama-Incretinomimetics afaka i-liraglutide, i-lixisenatide, i-sitagliptin, i-saxagliptin ne-alogliptin.
Ukuqokwa kwamalungiselelo we-insulin kuyadingeka kohlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela, inkambo leyo ebonakala ngokufihlakala kokukhubazeka kanye nokukhiqizwa kwe-insulin yendabuko ngamaseli we-beta weziqithi ze-pancreatic zeLangerhans. Futhi ukuzinza isimo sesiguli, ukuphathwa kwe-insulin kubazali kuyadingeka - ukwelashwa okubuyisela esikhundleni.
Izimo ezidinga ukuphathwa kwe-insulin eyengeziwe ngohlobo 2 lwesifo sikashukela:
i-hyperosmolar ne-lactic acidotic coma,
izifo ezithathelwanayo nezihlanzekile,
ukwanda kwezifo ezingamahlalakhona,
izimpawu zokukhula kwezinkinga ezinzima ezivela ohlelweni lwe-vascular,
ukwehla kwesisindo okungazelelwe
ukuthuthukiswa kokumelana nemithi ye-hypoglycemic yomlomo.
Umthamo we-insulin olungiselelwe uhambelana nezinga lokungakwaneleki. Isidakamizwa, umthamo kanye neshedyuli yokuphatha kunqunywa yi-endocrinologist ngokususelwa kuzimpawu nasemiphumeleni yocwaningo olwengeziwe.
owenza izinto ezimfushane - i-Insulan, Actrapid, Swinsulin nabanye,
ubude besikhathi esiphakathi - Semilong, Protafan, Semilent, Rapitard nabanye,
ukuthatha isikhathi eside - i-insulin tape, i-insulin ultralente nabanye.
Ekwelapheni uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo loku-1, i-insulin yezikhathi ezihlukene zezenzo ifakwa ngokungenasici ezindaweni ezithile ngokuya ngohlelo olunconywe udokotela. Ukuthola umphumela omuhle ekwelashweni, ukudla kuyimpoqo. Kusetshenziswa ama-insulin amafushane kuphela angasebenza ngokunzulu, okusetshenziselwa ukwakhiwa komthambo.
Ukwelashwa kwe-insulin kungaba yinkimbinkimbi:
Ukuphatha i-insulin, udinga i-insulin enokulahlwa, isazi se-endocrinologist kumele sichaze ukuthi siyisebenzisa kanjani. I-insulin igcinwa esiqandisini, ngaphambi kokuba umjovo ngamunye ukhishwe futhi ufuduselwe ekushiseni kwegumbi.
Kukhona ezinye izindlela zokuphatha i-insulin - iphampu ye-insulin efakwe isisabalalisi se-insulin, amamodeli ahlukahlukene wamapeni wesirinji enzelwe ukusetshenziswa okuphindwayo.
Kunezidakamizwa eziningi ze-hypoglycemic ezisiza ekulweni nesifo sikashukela, kepha ngudokotela oyi-endocrinologist kuphela onganquma uhlobo olusebenzayo lokwelashwa.
Izakhiwo nezenzo zokuphuma kwe-sulfonylurea
Izithako ze-sulfonylureas zatholakala ngengozi maphakathi nekhulu leminyaka edlule. Amandla ezinhlanganisela ezinjalo asungulwa ngesikhathi lapho kwavela ukuthi lezo ziguli ezaziphuza izidakamizwa ze-sulfa ukuqeda izifo ezithathelwanayo nazo zathola ukwehla kushukela wazo wegazi. Ngakho-ke, lezi zinto zibuye zibe nomphumela omenyezelwe we-hypoglycemic ezigulini.
Ngalesi sizathu, ngokushesha kwaqala ukufuna izindlela zokuphuma kwe-sulfanilamide nekhono lokwehlisa izinga le-glucose emzimbeni. Lo msebenzi waba negalelo ekuhlanganiseni kokutholakala kokuqala kwe-sulfonylurea emhlabeni, okwakwazi ukuxazulula kufanelekile izinkinga zesifo sikashukela.
Umthelela wokutholakala kwe-sulfonylurea kuhlotshaniswa nokwenza kusebenze kwamaseli akhethekile we-pancreatic beta, ahlotshaniswa nokukhuthaza nokwanda kokukhiqizwa kwe-insulin. Isidingo esibalulekile somphumela omuhle ukuba khona kwamanyikwe kokuphila kwamaseli e-beta agcwele.
Kuyaphawuleka ukuthi ngokusetshenziswa isikhathi eside kokutholakala kwe-sulfonylurea, umphumela wabo omuhle wokuqala ulahlekile ngokuphelele. Umuthi uyeka ukuthinta ukuphepha kwe-insulin. Ososayensi bakholelwa ukuthi lokhu kungenxa yokwehla kwenani lama-receptors kumaseli e-beta. Kwabuye kwembulwa ukuthi ngemuva kwekhefu ekwelashweni okunjalo, ukusabela kwalawa maseli kulo muthi kungabuyiselwa ngokuphelele.
Amanye ama-sulfonylureas nawo anganikeza umphumela owengeziwe we-pancreatic. Isenzo esinjalo asinayo inani elibalulekile lomtholampilo. Imiphumela eyengeziwe ye-pancreatic ifaka:
ukwanda kokuthikamezeka kwezicubu ezincike kuma-insulin kuya ku-insulin yemvelo engaphandle,
kunciphise ukukhiqizwa kweshukela.
Yonke inqubo yokuthuthukiswa kwale miphumela emzimbeni kungenxa yokuthi izinto (i-Glimepiride ikakhulukazi):
khuphula inani lama-receptors azwela i-insulin esitokisini sethagethi,
ngcono ukusebenzisana nokusebenzisana kwe-insulin-receptor,
shintsha ukuguqulwa kwesiginali ye-postreceptor.
Ngaphezu kwalokho kunobufakazi bokuthi i-sulfonylurea derivatives ingaba yisisulu sokukhishwa kwe-somatostatin, okuzokwenza ukuthi icindezele ukukhiqizwa kwe-glucagon.
Kunezizukulwane eziningana zale nto:
Isizukulwane sokuqala: "Tolazamide", "Tolbutamide", "Carbutamide", "Acetohexamide", "Chlorpropamide",
Isizukulwane sesibili: Glibenclamide, Glikvidon, Gliksoksid, Glibornuril, Gliklazid, Glipizid,
Isizukulwane sesithathu: I-Glimepiride.
Kuze kube manje, ezweni lethu, izidakamizwa zesizukulwane soku-1 cishe azisetshenziswa ekusetshenzisweni.
Umehluko omkhulu phakathi kwezidakamizwa 1 no-2 ezizukulwaneni ezihlukene zomsebenzi wazo. Isizukulwane sesibili sulfonylurea singasetshenziswa kumithamo ephansi, esiza ukusiza ngokufanelekile ukunciphisa amathuba emiphumela emibi ehlukahlukene.
Ekhuluma ngamanani, umsebenzi wawo uzoba ngaphezu kwama-50 noma ngisho nokuphindwe kayikhulu. Ngakho-ke, uma isilinganiso esidingekayo somuthi wansuku zonke wezidakamizwa zesizukulwane sokuqala kufanele sisuke ku-0,75 siye ku-2 g, khona-ke izidakamizwa zesizukulwane sesibili zihlinzeka ngomthamo we-0,02-0.012 g.
Okunye okususelwa ku-hypoglycemic nakho kungahlukahluka ekubekezelelekeni.
Izidakamizwa ezaziwa kakhulu
I-Gliclazide - Lokhu kungenye yalezo zidakamizwa ezinqunywe kaningi. Umuthi awunagalelo kuphela lokufanelekile we-hypoglycemic, kodwa futhi unikela ekuthuthukisweni:
Izici zokuhlaziya igazi
Amasistimu we-heestatic, i-microcirculation
umsebenzi we-heparin ne-fibrinolytic,
Ngaphezu kwalokho, i-Glyclazide iyakwazi ukuvimba ukuthuthukiswa kwe-microvasculitis (ukulimala kwe-retinal), ivimbele noma yikuphi ukubonakaliswa okunolaka kwamapuleti, ikhulisa kakhulu inkomba yokuphambana futhi ibonise izakhiwo ze-antioxidant ezinhle kakhulu.
I-Glycvidon - umuthi ongabekelwa lawo maqembu eziguli onomthelela omncane wezinso. Ngamanye amagama, inqobo nje uma amaphesenti ama-5 ama-metabolites adonswa izinso kanti amanye angama-95 asele ngamathumbu
I-Glipizide Inomphumela omenyezelwe futhi ungamelela izingozi ezimbalwa ekuziphendukeni kwe-hypoglycemic. Lokhu kwenza ukuthi kungenzeki ukuhlanganisa futhi kungabi nama-metabolites asebenzayo.
Izici zokusetshenziswa kwama-ejenti omlomo
Amaphilisi we-antidiabetesic kungaba ukwelashwa okuyinhloko kohlobo lwesifo sikashukela 2, esizimele sokudla i-insulin. Izidakamizwa ezinjengalezi zinconywa kwiziguli ezingaphezulu kweminyaka engama-35 futhi ngaphandle kwezinkinga zenkambo yazo:
ukusilela kokudla okunempilo
izifo ezidinga usizo oluphuthumayo lwe-insulin.
Ukulungiswa kweSulfonylurea akuboniswanga kulezi ziguli, ngisho nokudla okwanele, isidingo sansuku zonke se-insulin ye-hormone sidlula uphawu lwamayunithi angama-40. Ngaphezu kwalokho, udokotela ngeke abanikeze incwadi uma kukhona uhlobo olunamandla lwesifo sikashukela, umlando wokukhathazeka kwesifo sikashukela kanye ne-glucosuria ephezulu emelene nemvelaphi yokwelashwa okufanele.
Ukudluliselwa ekwelapheni nge-sulfonylurea kungenzeka ngaphansi kwesimo se-carbohydrate metabolism ephazamisekile, kunxephezelwe ngemijovo eyengeziwe ye-insulin ngemithamo yamayunithi angaphansi kwama-40. Uma kunesidingo, kuze kufinyelele ku-10 PIECES, ukuguqulwa kuzokwenziwa kokutholwa kwalesi sidakamizwa.
Ukusetshenziswa isikhathi eside kwe-sulfonylurea derivatives kungadala ukukhula komzimba, okunganqotshwa kuphela ngokuhlanganiswa kwenhlanganisela nokulungiselela kwe-insulin. Ngohlobo 1 sikashukela, iqhinga elinjalo lizonikeza umphumela omuhle ngokushesha ngokwanele futhi lizosiza ukunciphisa isidingo sansuku zonke se-insulin, futhi sithuthukise inkambo yesifo.
Ukuncipha kokuqhubeka kwe-retinopathy ngenxa ye-sulfonylurea kuye kwabonwa, futhi isifo sikashukela siyinkinga enkulu. Lokhu kungahle kube ngenxa yomsebenzi we-angioprotective we-derivatives wawo, ikakhulukazi lawo wesizukulwane sesi-2. Noma kunjalo, kukhona amathuba athile womphumela wabo we-atherogenic.
Kumele kuqashelwe ukuthi okususelwa kulo muthi kungahlanganiswa ne-insulin, kanye nama-biguanides kanye ne- "Acarbose". Lokhu kungenzeka ezimweni lapho impilo yesiguli ingathuthuki ngisho nangamayunithi ayi-100 e-insulin ngosuku.
Usebenzisa izidakamizwa ezinciphisa ushukela, kufanele kukhunjulwe ukuthi umsebenzi wabo unganciphisa:
Lapho usebenzisa lezi zimali ngaphezu kwezidakamizwa ze-sulfa, i-metabolism ingathikamezeka, okuzoholela ekwakhiweni kwe-hyperglycemia.
Uma uhlanganisa okususelwa ku-sulfonylurea ne-thiazide diuretics (ngokwesibonelo, "Hydrochlorothiazod") ne-BKK ("Nifedipine", "Diltiazem") kumthamo omkhulu, khona-ke ukuphikisana kungaqala ukukhula. Ama-Thiazides avimba ukusebenza kokuphuma kwe-sulfonylurea ngokuvula iziteshi ze-potassium. Ama-LBCs aholela ekuphazamisweni ekunikezelweni kwama-calcium ion kumaseli we-beta pancreas.
Okususelwa ku-sulfonylureas kukhulisa kakhulu umphumela nokubekezelela utshwala. Lokhu kungenxa yokulibaziseka kwenqubo yoku-oxidation ye-acetaldehyde. Ukubonakaliswa kokuphendula okufana ne-antabuse nakho kungenzeka.
Ngaphezu kwe-hypoglycemia, imiphumela engathandeki ingaba:
i-aplastic noma i-hemolytic anemia,
ukuthuthukiswa kokungafani komzimba,
Ngaphansi kwama-meglitinides kufanele aqondwe ngabalawuli be-prandial.
I-Repaglinide ithathwe kwe-benzoic acid. Umuthi uhlukile ngesakhiwo samakhemikhali kusuka kokutholakala kwe-sulfonylurea, kepha banomphumela ofanayo emzimbeni. I-Repaglinide ivimba iziteshi ze-potassium ezincike ku-ATP kumaseli e-beta asebenzayo futhi ikhuthaza ukwenziwa kwe-insulin.
Ukuphendula komzimba kuza isigamu sehora ngemuva kokudla futhi kuboniswa ngokuncipha koshukela wegazi. Phakathi kokudla, ukugcwala kwe-insulin akushintshi.
Njengezidakamizwa ezisuselwa ku-sulfonylureas, impendulo enkulu ephikisayo yi-hypoglycemia Ngokucophelela kakhulu, umuthi unganconywa kulezo ziguli ezinokwehluleka kwe-renal noma kwesibindi.
INateglinide ithathwe ku-D-phenylalanine. Umuthi wehluka kwezinye ezifanayo ekusebenzeni kahle ngokushesha, kepha ungazinzi. Kuyadingeka ukusebenzisa umuthi ngohlobo lwe-2 yesifo sikashukela ukunciphisa izinga lesifo se-postprandial hyperglycemia.
AmaBiguanides abaziwa kusukela ngeminyaka yama-70s yekhulu leminyaka edlule futhi ayebekelwe ukugcinwa kwe-insulin ngamaseli e-beta pancreas. Ithonya labo linqunywa ukuvimbela i-gluconeogeneis esibindini kanye nokwanda kwekhono lokukhipha ushukela. Ngaphezu kwalokho, ithuluzi linganciphisa ukungasebenzi kwe-insulin futhi lenyuse ukubopha kwalo kuma-insulin receptors. Kule nqubo, i-metabolism kanye nokumuncwa kwe-glucose kuyanda.
AmaBiguanides awawehlisi ushukela wegazi lomuntu ophilile nalabo abahlushwa isifo sikashukela sohlobo 2 (ngokuya ngendlala yasebusuku).
I-Hypoglycemic biguanides ingasetshenziswa ekwakhiweni kwesifo sikashukela sohlobo 2. Ngaphezu kokunciphisa ushukela, lesi sigaba sezidakamizwa ngokusetshenziswa kwazo isikhathi eside sithinta kahle i-fat metabolism.
Njengomphumela wokusetshenziswa kwezidakamizwa zaleli qembu:
i-lipolysis yenziwe yasebenza (inqubo yokuhlukanisa amafutha),
ukwehla kwesifiso sokudla
isisindo kancane kancane sibuyela kokujwayelekile.
Kwezinye izimo, ukusetshenziswa kwazo kuhambisana nokuncipha kokuqukethwe kwama-triglycerides ne-cholesterol egazini, kungashiwo ukuthi ama-biguanides amaphilisi okwehlisa ushukela wegazi.
Kuhlobo 2 sikashukela i-mellitus, ukwephulwa kwe-carbohydrate metabolism kungahle kuhlotshaniswe nezinkinga ku-fat metabolism. Cishe amaphesenti angama-90 amacala, iziguli zikhuluphele. Ngalesi sizathu, ngokuthuthukiswa kwesifo sikashukela, kanye nokukhuluphala okusebenzayo, kuyadingeka ukusebenzisa izidakamizwa ezenza ukuthi umzimba ube ne-lipid metabolism.
Inkomba enkulu yokusetshenziswa kwe-biguanides uhlobo lwesifo sikashukela 2. Umuthi ubaluleke kakhulu ngokubhekisele emuva ngemuva kwesisindo ngokweqile kanye nokwelashwa kokudla okungasebenzi noma ukusebenza okunganele kokulungiselela kwe-sulfonylurea. Isenzo se-biguanides senzeka uma kungabikho i-insulin egazini.
I-Alpha glucose inhibitors ivimbela ukuqhekeka kwama-polysaccharides nama-oligosaccharides.Ukufakwa nokukhiqizwa kweglucose kuyancishiswa futhi ngaleyo ndlela kunesixwayiso sokuthuthuka kwe-postprandial hyperglycemia. Wonke ama-carbohydrate aphuthwe nokudla, esimweni sawo esingashintshiwe, angena ezingxenyeni eziphansi zamathumbu amancane nakakhulu. Ukufakwa kwe-monosaccharides kuthatha amahora ama-4.
Ngokungafani nezidakamizwa ze-sulfa, i-alpha glucose inhibitors ayikhulisi ukukhishwa kwe-insulin futhi ayinakubangela i-hypoglycemia.
Njengomphumela wezifundo, kuye kwafakazelwa ukuthi ukwelashwa ngosizo lwe- "Acarbose" kungahle kuhambisane nokuncipha kwamathuba okuthola imithwalo emibi ye-atherossteosis.
Ukusetshenziswa kwama-inhibitors anjalo kungaba ngesimo se-monotherapy, futhi futhi uwahlanganise nezinye izidakamizwa zomlomo ezisehlisa ushukela wegazi. Umthamo wokuqala uvame ukuba ngama-25 kuye kwangama-50 mg ngokushesha ngaphambi noma ngesikhathi sokudla. Ngokulashwa okwalandela, umthamo ungakhushulwa ufike ezingeni eliphakeme (kodwa hhayi ngaphezulu kwama-600 mg).
Izinkomba eziphambili zokuqokwa kwe-alpha-glucosidase inhibitors yilezi: uhlobo lwe-2 sikashukela i-mellitus nge-tiba elibi lokudla, uhlobo 1 lwesifo sikashukela, kepha kuncike ekwelashweni okuhlanganisa.
Izidakamizwa ezidumile ze-hypoglycemic nezimpawu zazo
Isifo sikashukela yi-pathology ejwayelekile ethinta inani elikhulu labantu. Lesi sifo sincike (uhlobo 1) futhi sizimele (uhlobo 2) kusuka ku-insulin. Ngefomu lokuqala, isingeniso salo siyadingeka, kwathi kwesesibili - ukuphathwa kwamathebulethi we-hypoglycemic womlomo.
Isenzo semithi ye-hypoglycemic yomlomo sihlose ukwehlisa ushukela wegazi. Le ndlela yokusebenza isuselwa ekubophweni kwe-insulin kuma-receptors ayo, okuvumela ukuthi kuthinte umsoco ushukela. Ngenxa yalokhu, izinga le-glucose liba eliphansi ngenxa yokuthi ukusetshenziswa kwalo kwezicubu ezixineneyo kuyenyuka futhi ukukhiqizwa ushukela esibindini kuvinjelwe.
Ithonya lama-ejenti omlomo lihlotshaniswa nokukhuthaza ama-β-cell of pancreas, lapho ukukhiqizwa kwe-insulin yendabuko kukhuliswa khona. Imithi ikhulisa umsebenzi wokugcina, ifaka isandla ekubophweni kwayo okusheshayo kuma-receptors, okwandisa ukumunca ushukela emzimbeni.
I-insulin yinto esemqoka edingwa ngabantu abanesifo sikashukela. Kepha ngaphandle kwakhe kunemithi eminingi yokuqondisa ngomlomo enomphumela we-hypoglycemic. Akhiqizwa ngendlela yamathebulethi futhi aphathwa ngomlomo ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2.
Imithi isiza ngokwejwayelekile ushukela wegazi. Kunamaqembu ambalwa wezidakamizwa. Lokhu kufaka phakathi ama-sulfonylureas, ama-meglitinides, ama-biguanides, ama-alpha-glucosidase inhibitors.
Ekuphatheni kwabazali, kusetshenziswa i-insulin. Imijovo ibaluleke kakhulu kwiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1. Lesi sigaba se-pathology sihambisana nokuphulwa kokukhiqizwa kwe-insulin endulin. Ngakho-ke, ukulungisa isimo sesiguli ngokwejwayelekile, ukwelashwa okubuyiselwa esikhundleni kuyadingeka ngokufakwa kwe-insulin yokwenziwa.
Kunezimo lapho ukusetshenziswa kwe-insulin kudingekile kwisifo sikashukela sohlobo 2. Lokhu kufaka phakathi:
Izifo zesimo esithathelwanayo noma esihlanzekile.
Izikhathi zokwanda kwezifo ezingamahlalakhona.
Ukuba khona kokwephulwa okukhulu ekusebenzeni kwemithambo yegazi.
Ukwehla kwesisindo okungazelelwe.
Ukuvela kokumelana kwamathebulethi we-hypoglycemic womlomo.
Umthamo we-insulin unqunywa ngokuqinile kudokotela oya khona. Faka into eningi njengoba isiguli singenayo. Ngokuhamba kwesikhathi, ithuluzi linomphumela ohlukile: lifushane, eliphakathi nelide.
Umuthi ufakwa ngaphansi kwesikhumba ezingxenyeni ezithile zomzimba ngokohlelo olwakhiwe udokotela.Ngobungcweti, into evunyelwe ukuphathwa kuphela ngokuthuthukiswa kokhilimu, kusetshenziswa umenzeli obambela amafushane.
Ukwelashwa kwe-insulin kungaholela emiphumeleni emibi engenzeka. Isiguli singathola i-hypoglycemic syndrome, ukusabela komzimba, ukumelana ne-insulin, i-lipodystrophy, ukuvuvukala.
I-insulin ifakwa isirinji noma ipampu ekhethekile. Inketho yakamuva kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi ingasetshenziswa kaninginingi.
Umuthi unikeza izizukulwane eziningana zaleli thuluzi. Eyokuqala ifaka amathebhulethi omlomo "Tolbutamide", "Carbutamide", "Acetohexamide", "Chlorpropamide", elesibili - "Glycvidon", "Glizoksid", "Gliclazid", "Glipizid", nakwelesithathu - "Glimepiride".
Manje, izidakamizwa ze-hypoglycemic zesizukulwane sokuqala azisetshenziswa empeleni ekwelapheni isifo sikashukela. Imithi yamaqembu ahlukene yehlukile kwelinye nelinye elisezingeni lomsebenzi. Izindlela zezizukulwane ezimbili zisebenza kakhulu, ngakho-ke isetshenziswa ngemithamo emincane. Lokhu kuvimbela ukwenzeka komphumela wecala.
Odokotela bakhetha ukwelashwa ngomlomo kuya ngecala lomtholampilo. Empini yokulwa noshukela wegazi ophakeme, amaphilisi alandelayo azibonakalise kahle:
I-Glycvidon. Kunqunyelwe ukuphathwa komlomo ezigulini ezinokukhubazeka okuncane komsebenzi wezinso. Ithuluzi lisiza ukunciphisa amazinga kashukela egazi, lithuthukise isimo sesiguli.
"Glipizide." Izibhebhe zomlomo zinomphumela obekiwe kushukela, empeleni azinikezi imiphumela emibi.
Izidakamizwa zomlomo ezinciphisa ushukela - indlela esemqoka yokwelapha isifo sikashukela sohlobo 2, esingancikile kwe-insulin. Ama-ejenti wezokwelapha ama-hypoglycemic anqunyelwe iziguli ezineminyaka yobudala engama-35, futhi ahlinzeke ukuthi iziguli azinayo i-ketoacidosis, ukungondleki, izifo, ukwelashwa okudingakalayo ukuphathwa kwe-insulin kudingekile.
Amathebulethi eSulfonylurea awavunyelwe ukusetshenziswa ngabantu abadinga inani elikhulu le-insulin nsuku zonke, abahlushwa isifo sikashukela esibuhlungu, isifo sikashukela kanye ne-glucosuria ekhuphukile.
Ngokulashwa isikhathi eside ngamathebulethi omlomo, ukumelana kungakhula emzimbeni, okungalawulwa kuphela ngosizo lokwelashwa okuyinkimbinkimbi nge-insulin. Ezigulini ezinohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, lokhu kwelashwa kusiza ekuzuzeni impumelelo esikhundleni ngokushesha, futhi kunciphise nokuthembela kwe-insulin yomzimba.
Amathebulethi angahlanganiswa ne-insulin, ama-biguanides ecaleni lapho isiguli singazizwa singcono lapho sisebenzisa imithamo emikhulu ye-insulin ngosuku. Ukuhlanganiswa nama-ejenti anjengeButadion, uCyclophosphamide, uLevomycetin, kuholela ekuwohlokeni kwesenzo sokutholwa.
Ngokuhlanganiswa kwe-sulfonylureas nge-diuretics ne-CCB, ukuphikisana kungaqhamuka. Ngokwehlukana, kufanelekile ukusho ukusetshenziswa kotshwala ngenkathi uphuza amaphilisi. Ama-Derivatives athinta isenzo esandisiwe sotshwala.
Izimali ezicatshangelwe zikhuthaza ukukhishwa kwe-insulin hormone egazini. Enye yazo yiRepaglinide. Kususelwa ku-benzoic acid. Ihlukile kwamanye amalungiselelo e-sulfonourea, kepha umphumela emzimbeni uyefana. Umuthi uvusa ukukhululeka kwe-insulin.
Umzimba uphendula ukwamukela ngemuva kwemizuzu engama-30 ngokunciphisa izinga likashukela egazini lesiguli. Amaphilisi we-repaglinide womlomo kufanele athathwe ngokucophelela ezigulini ezitholakala ukuthi zinesibindi nokuhluleka kwezinso.
Esinye isidakamizwa esihlobene nama-meglitinides yiNateglinide. Kususelwa ku-D-phenylalanine. Amacwecwe omlomo asebenza kakhulu, kepha awahlali isikhathi eside. Kunconywa ukuthatha lo muthi kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2.
Zenzelwe ukucindezela ukukhiqizwa kwe-glucose esibindini kanye nokwenza ngcono ukuphuma kwalo emzimbeni.Futhi, ama-ejenti omlomo avuselela umsebenzi we-insulin, aba negalelo ekuxhumaneni okungcono nama-receptors awo. Lokhu kukuvumela ukuthi wenze ngokwejwayelekile izinqubo ze-metabolic futhi wandise ukumunca ushukela.
IBiguanide inomphumela omuhle lapho kukhona isifo sikashukela sohlobo 2, asilinciphisi ushukela egazini lomuntu ophilile. Ngaphezu kokwehlisa ushukela, izidakamizwa ezinjalo nokusetshenziswa isikhathi eside zinomphumela omuhle ekulweni kwe-lipids emzimbeni. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba abanesifo sikashukela bavame ukukhuluphala.
Lapho uthatha amaphilisi, inqubo yokuhlukanisa amafutha isetshenziswa yenziwa yenziwa imvelo, isifiso sokudla siyancishiswa, isimo sesiguli sibuyiselwa kancane kancane. Kwesinye isikhathi ukusetshenziswa kwaleli qembu lezidakamizwa kudala ukwehla kwezinga le-triglycerides ne-cholesterol egazini.
Amacwecwe omlomo aleli qembu asiza ukucindezela inqubo yokuhlukanisa ama-carbohydrate. Ngenxa yalokhu, ukumuncwa kahle koshukela kwenzeka, umkhiqizo wawo uyancipha. Lokhu kusiza ukuvimbela ukwanda kwe-glucose, noma i-hyperglycemia. Ama-carbohydrate adliwe ngumuntu ngokudla angena amathumbu ngendlela efanayo lapho angena emzimbeni.
Isibonakaliso esiyinhloko sokuqokwa kwamatafula anjengomlomo uhlobo lwesifo sikashukela sesi-2, esingalawulwa ngokudla kokudla. Baphinde banikeze ikhambi lohlobo lokuqala lwe-pathology, kepha njengengxenye yokwelashwa okuphelele.
Odokotela ngokuyinhloko bakhetha ukunquma izibhebhe zomlomo ezibizwa nge- “Glidiab” ezigulini. Isithako sabo esisebenzayo yi-gliclazide. Umuthi ukhiqiza umphumela obonakalayo wokwehlisa ushukela wegazi, uthuthuke namamitha we-hematological, izakhiwo zegazi, i-heestasis, ukuhamba kwegazi.
Ithuluzi livimbela ukulimala kwe-retinal, liqeda imiphumela emibi yamapuleti, inomphumela we-antioxidant. Awukwazi ukusikhipha uma kwenzeka kuba ne-hypersensitivity kuzakhi zomuthi, thayipha isifo sikashukela esingu-1, i-ketoacidosis, i-coma, ukwehluleka kwezinso nesibindi, ukuzala izingane nokuzondla, iminyaka engaphansi kweminyaka eyi-18.
Amathebulethi okuphatha ngomlomo akhulisa ukukhiqizwa kwe-insulin ngama-pancreas, athuthukise ukukhishwa kwalokhu. Futhi kuthinte kahle ukuthuthukiswa kokuzwela kwezicubu ezixakile ze-insulin. Umuthi ubekelwe uhlobo 2 lwesifo sikashukela i-mellitus ngesikhathi se-monotherapy noma sihlanganiswa ne-metformin noma i-insulin.
Akuvunyelwe ukuphuza amaphilisi kubantu abane-ketoacidosis, ikhefi, ukuzwela okuphezulu komuthi, isifo sesibindi noma isifo sezinso, ukungabekezelelani kwe-lactose, ukuntuleka kwe-lactase emzimbeni. Futhi, awukwazi ukusebenzisa umuthi kwabesifazane abakhulelwe nababenqenqemeni, izingane.
Kutholakala ngohlobo lwezibhebhe zomlomo ezibizwa nge- “L-thyroxine”. Yabela ukuze uthuthukise izinqubo ze-metabolic zama-carbohydrate nezinye izinto ezibalulekile, uqinise umsebenzi wenhliziyo nemithambo yegazi, uhlelo lwezinzwa.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa zomlomo akuvunyelwe ezigulini ezihlushwa ukungabekezelelani komuntu ngamunye kwizakhi zalo, i-thyrotooticosis, ukushaya kwenhliziyo, i-myocarditis, ukungasebenzi kahle kwe-adrenal, umuzwa we-galactose, ukuntuleka kwe-lactase, kanye nokungafakwa kahle koshukela.
Amaphilisi anciphisa amazinga kashukela, enza ngokwejwayelekile ukusatshalaliswa koshukela emzimbeni wonke. Kunconywa ikhambi ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, uma ukudla nokuzivocavoca kungalethi umphumela ofanele.
Kunokuphikisana okuningi ngokusetshenziswa kwemithi yomlomo. Ukusetshenziswa isikhathi eside kuthinta kabi impilo yabantu. I-Metformin ayivunyelwe ukusetshenziswa ne-hypersensitivity to the drug, coma, ketoacidosis, kwesibindi ukwehluleka, ukwehluleka kwezinso, i-pathologies ethelelekile yokuhlinzwa, ukuhlinzwa okuningana, ukudakwa ngokweqile, ukudakwa, ukuzala izingane, izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-10.
Uhlu lwezinto ze-hypoglycemic luhlanganisa ne-tiamazole - into esebenzayo yesidakamizwa somlomo "iTyrosol". Kunqunyelwe i-thyrotooticosis ukuthi inciphise ukukhiqizwa kwama-hormone egilo. Ukuqedwa kwalesi sifo kubalulekile phambi kwesifo sikashukela.
Akuyaluleki ukuthi uthathe amaphilisi e-agranulocytosis, ukungabekezeleli nomuthi ngamunye, i-granulocytopenia, ukusetshenziswa kwe-sodium levothyroxine ngesikhathi sokuzala kwengane, i-cholestasis, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-3 ubudala. Ngokuqapha ngokweqile, umuthi odluliselwa ngomlomo uyadingeka kubantu abanenkinga yokuhluleka kwesibindi.
Isifo sikashukela yisifo esibi esidinga ukwelashwa. Uhlobo lokwelashwa oludingekayo kufanele lwakhiwe ngudokotela ohambelayo. Amaqhinga angalungile okulwa ne-pathology angadala imiphumela eyingozi empilweni yomuntu nasempilweni.
Izidakamizwa zeHypoglycemic zisetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela. Le mishanguzo ikhulisa ukukhiqizwa kwe-insulin kumanyikwe futhi yandise ukuzwela kwamangqamuzana okuqondisa esenzweni saleli hormone. Uhlu lwezidakamizwa lubanzi kakhulu, ngoba lumelelwa yinani elikhulu lezinto ezisebenzayo namagama okuhweba.
Ama-Synthetic hypoglycemic agents asetshenziselwa uhlobo 2 sikashukela ukwehlisa ushukela wegazi. Isenzo sabo sihambisana nokuqala kokukhiqizwa kwe-insulin yabo ngamaseli e-beta ezinqola zabantu beLangerhans. Yile nqubo ephazanyiswa ukwanda koshukela wegazi. I-insulin idlala indima yokhiye emzimbeni, sibonga ukuthi lelo glucose, okuyi-energy reservation, lingena ngaphakathi esitokisini. Ibopha i-molecule yeshukela futhi, ngenxa yalokho, ingena kuyi-cytoplasm yeseli.
Izinto ze-Hypoglycemic zingakhuphula ukukhiqizwa kwe-somatostatin, kunciphise ngokuzenzakalelayo ukwakheka kwe-glucagon.
Imithi esetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela i-mellitus inegalelo ekufakweni kwe-glucose esitokisini, ngenxa yalokho, umzimba usebenzisa amandla asetshenziswa ngokudla. Ngaphezu kwalokho, ezinye izidakamizwa zingakhulisa ukuzwela kwezicubu emthanjeni omncane we-insulin okhiqizwa ama-pancreas. Izinto ze-antidiabetic zingathuthukisa ubudlelwano be-insulin-receptor kanye nokukhiqizwa kwesiginali esithunyelwe ebuchosheni ukukhiqiza inani elikhulu laleli hormone.
Ngokuya ngomshini wesenzo, ngenxa yokuthi kukhona ukwehla kwenani likashukela egazini, yonke izidakamizwa ihlukaniswe ngamaqembu ambalwa ezinto. Kunezigaba ezinjalo zemithi enciphisa ushukela:
Izidakamizwa ezinciphisa ushukela zingahlukaniswa ngamaqembu amaningana.
sulfonylurea kanye nezinto ezisuswayo,
i-inhibitory alpha glucosidases,
ukwanda kwe-insulin secretion - i-incretinomimetics.
Ama-Biguanides, okuyi-Metformin yawo, anecala lokwehlisa ukucashunwa kukashukela isibindi kusuka kumaphrotheni namafutha, futhi futhi kunciphise ukumelana kwezicubu ne-insulin. Ama-insulin, aqukethe i-sulfonylurea, efana nama-meglitinides, angathuthukisa ukukhululeka kwe-hormone kumanyikwe. Ama-glitazones anciphisa ukumelana komzimba kwento futhi acindezela ukukhiqizwa kwangaphakathi koshukela. Izidakamizwa ezinjenge-alpha-glucosidase inhibitors zingakonakalisa ukumuncwa kwe-glucose emikhiqizweni yokudla, ngenkathi kunciphisa ukugxuma kwazo ku-plasma yegazi.
Lezi izidakamizwa ze-antidiabetic ezingaphuzwa ngomlomo ngaphandle kokusebenzisa imijovo. Zisetshenziswa ezigabeni zokuqala zenkambo yesifo ngamanani amancane emithi esetshenziswayo nemithamo yazo ephansi. Imvamisa, kusetshenziswa amaphilisi noma amaphilisi. Ukuphathwa ngomlomo kusilungele isiguli, akudingi amakhono kanye nemibandela yokusebenzisa.
Isifo sikashukela sohlobo 2 sibuye sisetshenziswe njengomjovo.Lokhu kungenzeka uma isiguli sidinga imithamo ephezulu yento esebenzayo, edinga isiguli ukuthi sithathe amanani amakhulu amaphilisi. Le ndlela yokuphatha iyamukeleka kwiziguli ezingabekezeleli imali, futhi uma kwenzeka kuba nezinkinga ezinzima zepheshana lesisu. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa zabazali zokuphazamiseka kwengqondo kwesiguli, okuphazamisa ukusetshenziswa okujwayelekile kwezinto ezithinta isifo sikashukela ngaphakathi, kuyakhonjiswa.
Ukuhlukaniswa kwezidakamizwa ezinciphisa ushukela, okubandakanya izakhi ezisebenzayo ezivame kakhulu:
Umuthi ungasuselwa ku-sodium levothyroxine.
Izidakamizwa ezisezimakethe ezenziwe ngendlela efanayo zingaba namagama ahlukile.
Isizukulwane esisha sulfonylurea derivative. Ihlanganyela ekwandiseni umkhiqizo wokuqala we-insulin ngamaseli we-beta wamanyikwe. Ithambisa kahle iziqongo ekukhuphukeni koshukela wegazi ngokugcina njalo izinga layo ngamanani afanayo. Ngaphezu kwalokho, umuthi osuselwa kuwo ungavimbela i-thrombosis futhi unciphise inani lezinkinga zesifo sikashukela.
Kubuye kubhekiswe ezinhlobonhlobo ze-sulfonylurea, kepha kungasetjenziswa isifo sikashukela sohlobo 1. Igqamisa ukukhishwa kwe-insulin, okuthinta iziteshi ze-beta zamaseli e-beta. Umphumela womuthi awahlali isikhathi eside, futhi ngenxa yalokho, umthamo wesibili uyadingeka ngemuva kwamahora angama-5-8. Ithuluzi alisetshenziselwa ukwephula isibindi noma izinso noma isifo sikashukela esinamandla sikashukela.
Umuthi obizwa nge-hypoglycemic ofana ne-hormone ye-thyroid ekhiqizwe indlala yegilo. Kusetshenziswa ngokuhlanganiswa nezidakamizwa zokwakheka okuhlukile futhi kugqugquzela ukutholwa okungcono kwe-insulin kanye noshukela ngama-cell cell. Ngakho-ke, inani loshukela egazini lehla ngokushesha okukhulu. Ihlala isetshenziselwa i-hyperglycemic coma, ngoba inomphumela osheshayo futhi obalulekile.
Unguhlu lwezidakamizwa zeqembu le-Biguanide futhi lubangela ukumuncwa kwe-glucose emathunjini, kuvimbela ukwakheka kwe-glucagon esibindini. Lokhu kusiza ukunciphisa isidingo sokukhiqizwa kwe-insulin. Zilungele kahle iziguli ezikhuluphele ngenxa yokudla ngokweqile. Umuthi lo wenza kube lula ukulingana kwe-lipoproten yegazi, ukuvimbela ukukhula kwe-atherosulinosis nokuphazamiseka kodonga lwe-vascular.
Kuyindlela yokuvimbela i-hormone ye-thyroid, futhi isetshenziswa uma kunenkinga yemithi eyeqile ye-hypoglycemic, lokhu kusebenza ikakhulukazi ekusetshenzisweni okwandayo kwe-sodium levothyroxine. Ukuthenga umuthi osuselwa kule nto, nakanjani udinga umuthi, ngoba umuthi onamandla ongathi uma usetshenziswa ngokungafanele, uholele ekuqubukeni komzimba noma nokufa kwesiguli.
Ukubuyekezwa kwezidakamizwa ezinciphisa ushukela kohlobo 2 sikashukela
Izidakamizwa ezinciphisa ushukela wohlobo 2 sikashukela zakha isisekelo sokwelashwa kwezidakamizwa ze-pathology. Ama-Hypoglycemic agents wokulawulwa komlomo anqunywa lapho, ngosizo lokwelashwa kokudla kanye nokujwayelekile kokusebenza ngokomzimba, akunakwenzeka ukufeza isinxephezelo ngalesi sifo. Wonke amaphilisi anciphisa ushukela anezinkomba zawo nezimpawu zokusebenzisa, ezibhekwa lapho zibekwa isiguli esithile.
Uhlu lwezidakamizwa zomlomo lwe-hypoglycemic luhlanganisa nezidakamizwa eziningi. Amaphilisi okunciphisa ushukela awahlali enqunyelwa ngokushesha. Ekuqaleni kwesifo, ukuqondiswa kwezinkomba ze-glucose kuvame ukwenzeka uma onesifo sikashukela enamathela ekwelashweni kokudla okuqunyelwe futhi nsuku zonke enza isethi yokuzivocavoca umzimba.
U-endocrinologist kuphela olapha isiguli ongakwazi ukukhetha i-hypoglycemic ngokwanele. Lapho unquma amaphilisi, okulandelayo kuyabhekelelwa:
isikhathi sokukhipha into esebenzayo emzimbeni,
umsebenzi wesidakamizwa maqondana nesigaba sokutholwa kwe-insulin,
ukubekezelelwa kwezidakamizwa - cabanga ngendlela yokuphila, izifo ezihlangene,
amathuba okujwayela amaphilisi,
lapho izitho zomzimba zithukululwa khona - isibindi noma izinso,
Indlela yokusebenza ye-PSSP (igama elisho izidakamizwa ezinciphisa ushukela) kusuka emaqenjini ehlukene lihlukile, ngoba lisuselwa ezicini ezithile. Amathebhulethi amaningi we-hypoglycemic enza amazinga e-glucose ajwayelekile ngokuthi:
ukugqugquzela kokukhishwa kwe-insulin yi-gland,
khuphula ukusebenza kahle kwe-hormone ekhiqizwayo,
yehlisa inani loshukela ezitho nasegazini.
Ukuhlukaniswa okulungile kwamacwecwe anciphisa ushukela wohlobo 2 sikashukela kusiza ukuhlukaniswa kwawo. Hlela:
Imithi eqenjini le-Biguanides,
alpha glycosidase inhibitors,
Ukuzinzisa amazinga kashukela, iziguli zivame ukunikezwa irejimenti elihlanganisiwe - ukuthatha i-PSSP eqenjini elihlukile. Imithi yesizukulwane sakamuva inikezwa ngezinzuzo eziningi ngokuqhathanisa nezendabuko, kepha uma ukhetha yona, kufanele kubhekwe ama-nuances enkambo yesifo.
Uhlu olukhulu lwezidakamizwa ezokwehlisa ushukela wohlobo 2 sikashukela luhlanganisa nama-biguanides - ama-ejenti omlomo aphazamisa ukuhanjiswa kwe-glucose kusuka esibindini kuya ezithweni zomzimba futhi kusheshiswe ukungena kwalo kanye nokuqhekeka kwezicubu zemisipha. Abayikhulisi imfihlo yehomoni yabo.
IBiguanides ivimbela ukwenziwa kabusha kwama-lipoproteins nama-asidi, okunciphisa ukwenzeka kwezinguquko ze-atherossteotic. Ngaso leso sikhathi, isisindo sincishisiwe, okuwusizo ikakhulukazi uma isiguli esinohlobo 2 sikashukela sikhula ngokweqile. Lapho ulapha nge-greatuanides, akukho muzwa wendlala, nawo onomphumela omuhle wokubambelela ekwelashweni kokudla.
Okubi kwe-Biguanides kufaka ukugcwala kwama-acid egazini, okuholela eketoacidosis. Imithi eqhamuka kuleli qembu ayenqunyelwe ukuthi isetshenziswe uma kunomlando wesifo senhliziyo, ukushaya kwenhliziyo, ukwehluleka kwezinso kanye nokuphefumula. Contraindicated ukulungiswa ushukela kuwo wonke ama-trimesters okukhulelwa futhi uma onesifo sikashukela ehlushwa uphuzo oludakayo.
Into esebenzayo ye-Biguanides yi-metmorphine, izinhlobo eziningana zokwenza ithebhulethi zenziwa ngesisekelo sazo. Uhlu lwabo lubandakanya:
I-Glucophage. Ukuthola umphumela wokwehlisa ushukela, umuthi usetshenziswa ngaphandle kokuphazamiseka. Lapho kuthathwa, ukusetshenziswa kotshwala nama-ejenti aqukethe i-ethanol akufakiwe. IGlucophage ende iqukethe i-metamorphine esebenza isikhathi eside.
I-Bagomet. Imiphumela emibi ihlala irekhodwa kakhulu uma usebenzisa umuthi ekwelapheni iziguli esezikhulile.
Siofor. Umuthi onciphisa ushukela uhlanganiswa nokudla okuphansi kwe-carb kusiza ukunciphisa ngokushesha isisindo.
I-Metformin Acre. Umsebenzi wokwelashwa okugcwele wesidakamizwa utholakala ngemuva kwamasonto amabili okuphatha.
AmaBiguanides awadali ukwehla okubukhali koshukela, kepha umthamo wesiguli ngasinye ukhethiwe ngamunye.
Isenzo semithi yomlomo ye-hypoglycemic ngomlomo nge-sulfonylurea ngokuyisisekelo sisekelwe ekuvuseleleni ukusebenza kwamaseli we-islet we-gland, okuthi ngenxa yalokho kuthuthukise ukwenziwa kwe-insulin. Umuthi wokuhlangana:
thuthukisa ukuzwela kwezicubu zokwamukela i-hormone,
inhibit glucogenesis - ukwakheka kwe-glucose kusuka emafutheni okudla, amaprotheni,
vimbela umsebenzi wamaseli we-alpha akhiwe kumanyikwe futhi obhekele ukucasulwa kwe-glucagon - i-hormone enesenzo esiphambene uma iqhathaniswa ne-insulin,
vimbela ukukhishwa kwezinto eziqukethe ushukela kusuka kumaseli wesibindi.
Ama-ejenti wakamuva we-sulfonylurea hypoglycemic asetshenziswa kabanzi ekwelapheni iziguli ezinesifo sikashukela. Emiphumela emibi engaba khona, isicanucanu, ukuphazamiseka kokugaya ukudla, isifo sokuqina kwezinzwa, ikhanda, nomsebenzi wezinso ongasebenzi kahle kubonakaliswa kakhulu. Kufakazelwe ukuqashwa:
ngokwehla okuqhubekayo kwesisindo somzimba ezigulini,
ngezifo ezinzima nokungenelela kokuhlinzwa,
ngezifo ezinzima zezinso nezinso.
Banikezwe imiphumela ye-teratogenic, ngenxa yalokho, ayinqunyelwe abesifazane abakhulelwe. Iqembu le-sulfonylurea lifaka:
Chlorpropamide. Isikhathi somphumela we-hypoglycemic amahora angama-24.
I-Glibenclamide. Kusetshenziswe ekwelapheni isifo sikashukela kusukela ngekhulu lamashumi amabili.
Maninil. Ukuthola umphumela ophikelelayo we-hypoglycemic, amaphilisi adakwa nsuku zonke ngasikhathi sinye.
I-Glipizide. Ukuqashwa kubekelwe iziguli ezikhubazekile.
I-Gliclazide. Ukuvimbela i-hypoglycemia, kunconywa ukuthi udle njalo, awukwazi ukulandela ukudla okuqinile.
I-overdose iholela ku-hypoglycemia. Izinzuzo ze-sulfonylureas azisebenzi uma iningi lamaseli we-beta asevele afa. Ngesikhathi ukunamathela kwabo ekudleni. Ngenxa yezizathu ezingaziwa, i-sulfanylurea kwezinye iziguli ayibonisi impahla ye-hypoglycemic.
Ama-glinids anomthelela ovuselelayo kumaseli we-beta we-gland. Le mishanguzo isiza ukuqinisa izinga le-glucose egazini, ingozi yokwehla okubukhali emzimbeni emzimbeni uma iqhathaniswa nemishanguzo ye-sulfanilurea iphansi kakhulu.
Ama-glinids anconyelwa ushukela kulezo ziguli ezinoshukela wegazi wazo ezikhuphuka ziye ezibalweni ezibucayi ngokudla. Phuza ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
Izakhiwo ezinciphisa ushukela zifana nokuphuma kwe-sulfanilurea, akufanelekile ukusebenzisa amaphilisi avela kula maqembu amabili ngasikhathi sinye.
Akukho ukuzuza kwesisindo lapho uzisebenzisa; odokotela bakhetha ukubabhalela ukuba babhale ngohlobo lwe-II sikashukela njengokuqala izidakamizwa ezinciphisa ushukela. Ngokusetshenziswa isikhathi eside kwama-glinides anqunyelwe, izakhiwo zawo ze-hypoglycemic ziyancipha.
Uhlu lwe-zobumba lubandakanya izidakamizwa ezimbili:
Esokuqala sitholakala kumathebulethi eNovonorm, elesibili - ku-Starlix. I-Repaglinide, ngokungafani ne-nateglinide, i-hyperglycemia esezingeni eliphansi ebonakala uma isiguli esinesifo sikashukela silamba isikhathi eside.
I-Glinids ayinayo imikhawulo yeminyaka; imvamisa inqunywa ngokuhlanganiswa namanye ama-PRSP. Zisebenzise ngokucophelela uma kunesifo sesibindi. Musa ukunquma le mishanguzo yesifo sikashukela esincike ku-insulin.
I-Thiazolidinediones, noma ngenye indlela i-glitazones, ithuthukisa ukuzwela kwezithako receptors to insulin. Ukuphinda kukhiqizwe ushukela kuyacindezelwa, futhi ngasikhathi sinye ukusetshenziswa kwawo kuyandiswa. Kunobufakazi bokuthi ama-glitazones ayakwazi ukunciphisa ingozi yokuqhamuka ne-pathologies yenhliziyo nemithambo yegazi. Kepha, ngaphandle kwalokhu, ama-thiazolidinediones awachazwa ngokwelashwa kweziguli ezinesifo sikashukela, ngoba kuzo zonke izigaba zokwelapha angakwazi:
Kuholele ekwenyukeni kwesisindo somzimba, ikakhulukazi ngenxa yokuqongelela uketshezi emzimbeni. U-Edema uvame ukucasuka ngokwenzeka kwenhliziyo.
Faka isandla ekuqhekekeni. Lapho uthatha ama-glitazones, izicubu zamathambo ziyahlanjululwa, ukuxineka kwawo kuyancipha, futhi ukuhlupheka okuncane kuholela ekuqhekekeni. Ngakho-ke, izidakamizwa azinqunyelwe abesifazane esikhathini sokuya esikhathini noma uma isiguli sikhombe izici zobungozi.
Ukubangela i-eczema. Ekwelapheni kwama-glitazones kwezinye iziguli, izinguquko zesikhumba zaqoshwa.
Uhlu lwe-thiazolidinediones lubandakanya iRosiglitazone (Avandia, Roglit) nePioglitazone (Aktos, Diaglitazone). Kusetshenziselwa ukwehluleka kwezinso.
Ngokusho kocwaningo lwezokwelapha, umphumela wokwehlisa ushukela we-alpha-glucosidase inhibitors uhlotshaniswa nokukhipha ukungasebenzi kahle kwezakhi ze-carbohydrate zokudla esiswini. Ngenxa yalokho, i-hyperglycemia ayikhuli. Ama-enzyme inhibitors awenyusi isisindo somzimba, kepha anemiphumela emibi:
Ukuphendula okungathandeki kungagwenywa uma ulandela imithetho yokwamukelwa. Ukwelashwa ngama-alpha glucosidase inhibitors kuqala ngemithamo emincane. Amaphilisi okwehlisa ushukela ayathathwa nokudla, kunconywa ukulandela ukudla - ukunciphisa umkhawulo wokudla okugaywe kahle ama-carbohydrate. Imithamo yandiswa kancane kancane - ifinyelela ku-25 mg ngeviki.Ngokusetshenziswa okuyikho kwama-inhibitors, imiphumela emibi iyancishiswa, imvamisa lokhu kwenzeka kungakapheli inyanga.
Into esebenzayo ye-enzyme inhibitors yi-acarbose, ngokusekelwe kuyo, amakhambi i-Vogliboz, Miglitol, Glyukobay akhiqizwa.
Izidakamizwa ze-hypoglycemic zesizukulwane esisha zisebenza kakhulu futhi zinemiphumela emibi embalwa. Ama-dipeptidyl peptidase inhibitors afakiwe ohlwini lwawo; ngaphansi kwethonya lawo, ukukhiqizwa kwe-incretin, i-hormone ethinta ukwakheka kwe-insulin, kuyasebenza.
Isizukulwane esisha sama-ejenti we-hypoglycemic sisetshenziswa ngokuzimela nangokubumbana namanye ama-PRSP. Ungaholeli ekuzuzeni isisindo, ubekezelelwa kahle ngokwelashwa okuhlala isikhathi eside. Abamele:
UJanuvius. Ithebhulethi kumthamo ka-25, 50 noma 100 mg uthathwa kanye ngosuku kanye noma ngokushesha ngemuva kokudla. UJanuvia uthuthukisa ukuvikelwa kwe-insulin kuphela uma ushukela emzimbeni uphakanyisiwe. Ngakho-ke, ngemuva kokuthatha umuthi akukho bungozi be-hypoglycemia. Ukusetshenziswa kwesidakamizwa akuyona kuphela ukwelashwa kwesifo sikashukela, kodwa futhi nokuvinjezelwa kwezinkinga zesifo sikashukela.
UGalvus. Kwandisa ukuvela kwama-polypeptides, kukhulisa ukuzwela kwamaseli we-islet. Isebenza ngempumelelo ngenkathi kubhekwa umbuso wokuzivocavoca umzimba nokwelashwa kokudla.
Ukuhlukaniswa kwamathebhulethi anciphisa ushukela kuhlanganisa nezinye izidakamizwa. Lokhu kufaka phakathi iDiabeNot. Umuthi wemvelo, owakhiwe ngesisekelo sezakhi zezitshalo, unesandla kulokhu:
ukwenza kusebenze amaseli we-beta,
ukuguqulwa okujwayelekile kwezinqubo ze-metabolic,
ukuhlanza i-lymph negazi,
Izivivinyo zomtholampilo zifakazele ukuthi i-DiabeNot yehlisa ushukela emzimbeni futhi ivimbela nezinkinga. Ukuthatha umuthi kubuyisela ukusebenza kwamanyikwe kanye namaseli wesibindi, akubangeli ukusabela okungekuhle. Amakhandlela athathwa kabili ngosuku.
Ngemuva kokuqala kokukhulelwa, ukwelashwa kwe-PSSP kufakwa umthetho kwabesifazane. Izakhi eziningi ezinciphisa ushukela zemithi zingena kwi-placenta, ezingathinta kabi ukukhula kwesibeletho.
Ngemuva kokuqamba, iziguli ezinesifo sikashukela zidluliselwa ekwelashweni kwe-insulin. I-hormone ikhethwa kumthamo ofanele owasetshenziswa ngaphambilini we-PSSP.
Kuyadingeka ukubheka njalo izinkomba zikashukela, owesifazane okhulelwe kufanele athathe njalo ukuhlola kwegazi nomchamo. Inkambo yesifo sikashukela lapho uzala ingane nayo ixhomeke ekudleni nasekusetshenzisweni komzimba.
Ngokufanelekile, abesifazane abanesifo sikashukela kufanele bahlele ukukhulelwa kwabo kusenesikhathi.
Impahla ye-teratogenic yama-ejenti we-hypoglycemic iboniswa ngokucacile emasontweni okuqala emva kokukhulelwa, okuholela ekufeni kombungu.
Uma owesifazane ehlela ukuzala ingane, udokotela ohambelayo angamdlulisela ekwelashweni kwe-insulin ngaphambi kwesikhathi.
Imithi yokwehlisa ushukela yeziguli ezinesifo sikashukela ikhethwe udokotela. Ukuzikhethela kwabo okuzimele kunzima futhi kuba imbangela yezinkinga ezingathandeki. Emazingeni okuqala okwelashwa, isiguli kufanele siqaphe ngokucophelela impilo yaso, siqhube njalo i-glucometry. Ukuqokwa kwama-ejenti we-hypoglycemic akuyona inkomba yokuqedwa kokudla. Uma imikhawulo yokudliwayo ingahlonishwa, khona-ke ukwelashwa kwe-PSSP ngeke kulethe izinzuzo.
Izidakamizwa ezinjena zenzelwe ukwehlisa amazinga eglucose ngqo egazini lomuntu.
Izidakamizwa ze-Hypoglycemic, kufaka phakathi i-analogues yazo, zinendlela eyodwa yokwenza. I-insulin iqala ukubopha kuma-receptors, ngaleyo ndlela ithinte i-glucose metabolism. Le mishanguzo nayo ingaba nomthelela kumanyikwe.
Zonke izidakamizwa ze-hypoglycemic zihlukaniswe ngokwemibandela ngamaqembu ambalwa. Qaphela ukuthi iqembu ngalinye linezimpawu zalo, ngakho-ke ukubonwa kwesenzo somuthi kungahluka:
Iqembu elivame kakhulu ama-sulfonylureas. Leli qembu lihlukaniswe izizukulwane eziningana (I, II nesizukulwane sesithathu).
Iqembu lesibili ngama-alpha-glucosidase inhibitors, lifaka izidakamizwa ezimbalwa kuneqembu lokuqala. Leli qembu, ngokungafani nelokuqala, linokubekezelelwa kwe-heparin.
Iqembu lesithathu yi-meglitinides. Imvamisa, esikhundleni saleli qembu, kunqunywa izidakamizwa ezibandakanya i-benzoic acid.
Iqembu lesine yi-Biguanides.
Okwesihlanu - thiazolidinediones.
Futhi iqembu lesithupha ngama-incretinomimetics.
Iqembu ngalinye lezidakamizwa linombono wazo wokusebenza. Ngaphandle kokuthi ama-analogues emithi ye-hypoglycemic anokwakheka okufanayo, angathinta umzimba wesiguli ngezindlela ezihlukile. Ngakho-ke, ngaphambi kokushintsha umuthi nge-analog ngokwakho, kubalulekile ukubonana nodokotela ukuze ugweme izinkinga ezinkulu.
Ithebhulethi kaGlidiab 80 mg, iphakethe lamathebulethi angama-60 (intengo - ama-ruble ayi-130)
Amacwecwe we-Glimepiride 2 mg, iphakethe lamathebulethi angama-30 (intengo - ama-ruble ayi-191)
I-L-thyroxine amaphilisi ayi-100 mcg, iphakethe lamathebulethi ayi-100 (intengo - ama-ruble angama-69)
Ithebhulethi L-Thyroxine 50 Berlin-Chemie 50 mcg, iphakethe lamathebulethi angama-50 (intengo - ama-ruble ayi-102,5)
I-L-thyroxine amaphilisi ayi-100 iBerlin-Chemie 100 mcg, iphakethe lamathebulethi ayi-100 (intengo - ama-ruble ayi-148,5)
I-L-thyroxine amaphilisi angu-150 iBerlin-Chemie 150 mcg, iphakethe lamathebulethi ayi-100 (intengo - ama-ruble ayi-173)
Ithebhulethi Metformin 1 g, amaphilisi angama-60 iphakethe ngalinye (intengo - ama-ruble angama-250.8)
I-Tablets Metformin Canon 850 mg, iphakethe lamathebulethi angama-30 (intengo - ama-ruble ayi-113.7)
Ithebhulethi Metformin MV-Teva 500 mg, iphakethe lamathebulethi angama-30 (intengo - ruble 135,2)
Ithebhulethi iTyrosol 5 mg, iphakethe lamathebulethi angama-50 (intengo - ama-ruble ayi-189.2)I-10 mg, iphakethe lamathebulethi angama-50 (intengo - ama-ruble angama-370.8)
Esikhathini sikashukela, ukwelashwa kufanele kube okuphelele: ukudla, izidakamizwa ze-hypoglycemic, ukuzivocavoca ne-insulin uma kukhonjisiwe. Njengamanje, kunezidakamizwa eziningi ezahlukahlukene ezinciphisa ushukela wegazi. Ubaba wami kwatholakala ukuthi unesifo sikashukela. Ekuqaleni, uSiofor wabekwa, kepha umuthi awunamphumela ofunekayo, waphendukela ku-endocrinologist. Udokotela unqume iMetformin. ubaba wazizwa engcono.
Lapha ngivuma ngokuphelele. Ngengozi yathola ukugula kwakhe, ubufakazi beshaya i-14mmol / l. Waqala ukuthatha i-metformin namavithamini, uHalvus wazama ukuthatha izikhathi ezimbalwa, waba nomphumela omubi, wabekelwa eceleni. Futhi ukudla nokuzivocavoca komzimba, ukwenqaba utshwala nokubhema kubalulekile!
Ngohlobo 2 sikashukela, ngizame izidakamizwa eziningi ezinciphisa ushukela, kufaka phakathi i-Glucofage, iSiofor, neTyrosol. Kepha ngamunye wabo wayengeke enze ngaphandle kwemiphumela emibi. Ngaphezu kwalokho, usanda kuthola isisindo esiningi, futhi ukulahla unesifo esinjalo kunzima kakhulu. I-endocrinologist inqume iMetformin. Cishe akukho miphumela emibi, ngaphandle kwe-nausea omncane ngemuva kokuthatha. Ngiyajabula ukuthi lesi sidakamizwa esifuywayo futhi asibizi kakhulu. Amazinga kashukela azinza kahle, nawo anomthelela ekujuleni kwesisindo.
Ngiyavuma ukuthi ohlelweni lokwelapha isifo sikashukela kuyadingeka ukuthi kunamathelwe ngokuqinile ekudleni okuphansi kwe-carb futhi kubalulekile ukuthi ukudla amaphilisi kuhlanganiswe ekudleni. Kwenzekile ngizama izidakamizwa eziningi ezinciphisa ushukela. Le yiSiofor, neThiyroxol, futhi ngisho nesifo sikashukela. Futhi ngempela, umuthi ngamunye unezinzuzo zawo kanye nobubi bawo. Manje ngithatha i-Acarbose. Ngiphuza amaphilisi ngokudla, zibekezeleleke kahle, azibangeli imiphumela emibi. Futhi okubaluleke kakhulu - ngokungafani nezinye izidakamizwa ezinciphisa ushukela, azifaki sandla ekutholeni amakhilogremu angeziwe, okubalulekile kimi.
Fadeeva, Isifo Sikashukela se-Anastasia. Ukuvimbela, ukwelashwa, umsoco / Anastasia Fadeeva. - M: Incwadi ngoDinga, 2011. - 176 c.
Karpova E.V. Ukuphathwa kwesifo sikashukela. Amathuba Amasha, iQuorum - M., 2011. - 208 k.
U-Aleshin B.V. Ukuthuthukiswa kwe-goiter kanye ne-pathogenesis yesifo se-goiter, State Medical Publishing House ye-Russian SSR - M., 2016. - 192 k.
Ukususa isifo sikashukela nezimpawu zayo, kusetshenziswa imishanguzo ekhethekile ehlose ukwehlisa izinga loshukela egazini lomuntu ogulayo. Ama-ejenti antidiabetesic (hypoglycemic) angasebenza ukusetshenziswa kwabazali, kanye nangomlomo.
Izidakamizwa ze-Oral hypoglycemic hypoglycemic zivame ukuhlukaniswa ngale ndlela elandelayo:
okususelwa ku-sulfonylurea (lezi yi-Glibenclamide, Glikvidon, Gliklazid, Glimepirid, Glipizid, Chlorpropamide),
alpha glucosidase inhibitors ("Acarbose", "Miglitol"),
meglitinides ("Nateglinide", "Repaglinide"),
i-greatuanides ("Metformin", "Buformin", "Fenformin"),
thiazolidinediones (Pioglitazone, Rosiglitazon, Tsiglitazon, Englitazon, Troglitazon),
Ukuhlanganiswa kokwelashwa ngama-ejenti we-hypoglycemic womlomo ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2
Uhlobo 2 sikashukela i-mellitus (DM) yisifo esingelapheki, esithuthukayo esisuselwa ekulweni nokuqina kwe-insulin. Ngohlobo 2 sikashukela, ukumelana nemisipha, izicubu ze-adipose, kanye nezicubu zesibindi esenzweni se-insulin kuyabonakala.
Ukuphikiswa kwemisipha yezicubu zomsipha kuyisici sokuqala futhi okungenzeka sinqunywe ngofuzo, okude kakhulu ngaphambi kokubonakaliswa kwesifo sikashukela sohlobo 2. Ukuhlanganiswa kwemisipha glycogen kudlala indima ebaluleke kakhulu ekuthathweni kwe-glucose encike ku-insulin ngokujwayelekile nangohlobo 2 sikashukela. Kodwa-ke, ukwakheka kwe-glycogen okhubazekile kuyinto esezingeni eliphansi kwezinkinga zokuhamba kweglucose kanye ne-phosphorylation
Ukwephulwa kwesenzo se-insulin esibindini kubonakaliswa ukungabikho komphumela wayo wokuvimbela izinqubo ze-gluconeogeneis, ukwehla kokuqanjwa kwe-glycogen esibindini, kanye nokwenza kusebenze kwezinqubo ze-glycogenolysis, okuholela ekwandeni kokukhiqizwa kwe-glucose ngesibindi (R. A. DeFronzo Lilly Lecture, 1988).
Okunye ukuxhumana okubamba iqhaza elibalulekile ekwakhiweni kwe-hyperglycemia ukumelana kwezicubu ze-adipose esenzweni se-insulin, okungukuthi ukumelana nomphumela we-insulin. Ukungakwazi kwe-insulin ukuvimbela i-lipid oxidation kuholela ekukhishweni kwenani elikhulu lamafutha acid (FFA) enkulu. Ukwanda kwamazinga we-FFA kuvimbela ukuhanjiswa kweglucose kanye ne-phosphorylation futhi kunciphise i-glucose oxidation kanye nokuhlanganiswa kwemisipha ye-glycogen (M. M. Hennes, E. Shrago, A. Kissebah, 1998).
Isimo sokumelana ne-insulin kanye nengozi enkulu yokuba nesifo sikashukela sohlobo 2 kusisimo sabantu abathile abane-visceral kunokuba kusatshalaliswe kwangaphandle kwezicubu ze-adipose. Lokhu kungenxa yezimpawu ze-biochemical of visceral adipose izicubu: iphendula buthaka kumphumela we-insulin. Ukwanda kokuhlanganiswa kwe-tumor necrosis factor kwabonwa ku-visceral adipose izicubu, okunciphisa umsebenzi we-tyrosine kinase we-insulin receptor kanye ne-phosphorylation yamaprotheni e-substrate ye-insulin receptor. I-Hypertrophy ye-adipocytes yohlobo lwesisu sokukhuluphala kuholela ekuguqukeni kokuqanjwa kwe-molecule ye-insulin nokuphazamiseka kokubopha kwayo i-insulin.
Ukumelana ne-insulin kungukunganele kokuphilayo okwenzeka kumaseli esenzweni se-insulin, ngokuqina kwawo okwanele egazini. Ukumelana nokuqina kwe-insulin kubonakala kudala ngaphambi kokukhula kwesifo sikashukela futhi kuthonywa yizakhi zofuzo nezemvelo (indlela yokuphila, ukudla).
Uma nje amaseli e-pancreatic β-cell ekwazi ukukhiqiza i-insulin eyanele ukunxephezela la maphutha futhi alondoloze isimo se-hyperinsulinemia, i-hyperglycemia izodala ingekho. Kodwa-ke, lapho imithombo yokulondolozwa kwe-β-cell isiphelile, isimo sokuntuleka kwe-insulin okuhlobene, okubonakala ngokwanda kweglucose yegazi nokubonakaliswa kwesifo sikashukela.Ngokusho kwemiphumela yocwaningo (Levy et al., 1998), ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 esidla kuphela ekudleni, eminyakeni engama-5-7 ngemuva kokuqala kwesifo, ukwehla okukhulu emsebenzini wama-β-cell kwenzeka, kuyilapho ukuzwela kwezicubu kwe-insulin empeleni kungenjalo uyashintsha. Ukusebenza kokuncipha okuqhubekayo kokusebenza kwe-β cell akuqondakali ngokuphelele. Ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi ukwehla kokuvuselelwa kabusha kwe-β-cell kanye nokwanda kokuvama kwe-apoptosis kungumphumela wokuphazamiseka kwezakhi zofuzo. Kungenzeka, ukukhululeka ngokweqile kwe-insulin ekuqaleni kwesifo kufaka isandla ekufeni kwe-β-cell noma secretion okweqile kwe-amylin (i-polypeptide ye-amyloid ehlanganiswe ndawonye ne-proinsulin) kungaholela ku-amyloidosis weziqhingi.
Kuhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, kubuye kubonakale lezi zinkinga ezilandelwayo ekuvikelweni kwe-insulin:
ukulahleka noma ukwehla okuphambili esigabeni sokuqala sokuvikelwa kwe-insulin
ukwehla noma ukungasebenzi okwanele kokuvikelwa kwe-insulin,
ukwephulwa kokuqunjelwa kwe-insulin kwe-pulsatory (okujwayelekile kunokushintshashintsha ngezikhathi ezithile kwe-insal insulin ngezikhathi zemizuzu engu-9-14),
ukukhushulwa okuthuthukile kwe-proinsulin,
ukwehla okungaguquki ekuqasheni kwe-insulin ngenxa ye-glucose ne-lipotoxicity.
Amasu wokulashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 kufanele ahlose ukuguqula izinqubo ze-pathogenetic ezingaphansi kwalesi sifo, i.e., ekunciphiseni ukumelana ne-insulin nokwenza umsebenzi we-β-cell.
Amathrendi ajwayelekile ekwelashweni kwesifo sikashukela:
ukuxilongwa kusenesikhathi (esigabeni sokukhubazeka kwe-glucose)
amaqhinga wokulashwa anolaka okuhloswe ngawo ukufeza kusengaphambili kokuhlosiwe kwe-glycemia,
ukusetshenziswa okubaluleke kakhulu kokwelashwa kwenhlanganisela,
Ukwelashwa kwe-insulin okusebenzayo ukufeza isinxephezelo se-carbohydrate metabolism.
Izindlela zanamuhla zokunxeshezelwa kwesifo sikashukela sohlobo 2, ezihlongozwe yi-International Diabetes Federation European Region ngo-2005, ziphakamisa ukuthi ukudla ngokushesha kwe-glycemia kube ngu-6.0 mmol / L, kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla ngaphansi kwama-8 mmol / L, i-glycated HbA1c hemoglobin ngaphansi kuka-6.5% , i-Normolipidemia, umfutho wegazi ngaphansi kwe-140/90 mm RT. Ubuciko., Inkomba yesisindo somzimba ngaphansi kwe-25 kg / m2. Imiphumela ye-UKPDS yasivumela ukuthi siphethe ngokuthi ubungozi bokuthuthuka kanye nokuqhubeka kwezinkinga zesifo sikashukela sohlobo 2 kanye nokwanda kwalesi sifo kuncike ngqo kwikhwalithi yokulawulwa kwe-glycemic kanye nezinga le-HbA1c (I. M. Stratton, A. L. Adler, 2000).
Njengamanje, kunezindlela ezingezona ezokwelapha nezokhemithi zokulungisa ukumelana ne-insulin. Izindlela ezingezona ezokulimaza zibandakanya ukudla okune-khalori ephansi okuhloswe ukunciphisa isisindo somzimba, kanye nokuzivocavoca umzimba. Ukwehla kwesisindo kungatholakala ngokulandela ukudla okunama-kilojoule amancane aqukethe amafutha angaphansi kwama-30%, amafutha angaphansi kuka-10%, kanye nama-fiber angaphezu kuka-15 g / kg ngosuku, kanye nokuzivocavoca umzimba njalo.
Iziguli zingahle zinconywe ukusebenza komzimba okujwayelekile kwe-aerobic ngokomzimba olinganiselayo (ukuhamba, ukubhukuda, ukushushuluza ngokushibhile, ukuhamba ngamabhayisekili) okuhlala imizuzu engama-30 kuye kwengama-30 kuye kayi-3 kuye kwayi-5 ngesonto, kanye nanoma yikuphi ukusetjenziswa okungenzeka kokuzivocavoca umzimba (J Eriksson, S. Taimela, 1997). Ukuzivocavoca kuvuselela ukuthathwa kwe-insulin-ezimele, ngenkathi ukwanda kokuzivocavoca kokuthathwa koshukela kuzimele esenzweni se-insulin. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sokuzivocavoca kukhona ukwehla okumangazayo kwamazinga e-insulin egazini. Ukuthathwa kwesikhumba somsipha kukhuphuka yize kwehla amazinga e-insulin (N. S. Peirce, 1999).
Ukudla kanye nokuzivocavoca komzimba kwakha isisekelo lapho ukwelashwa kwazo zonke iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 kusekwe, futhi kuyingxenye edingekayo yokwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 - noma ngabe iluphi uhlobo lokwelashwa kwe-hypoglycemic.
Ukwelashwa kwezidakamizwa kunqunywe ezimweni lapho izindlela zokudla nokwanda ngokomzimba izinyanga ezintathu zingavumeli ukufeza inhloso yokwelashwa.Ngokuya ngezindlela zesenzo, izidakamizwa ze-hypoglycemic zomlomo zihlukaniswe ngamaqembu amathathu amakhulu:
ukuthuthukisa ukuvikelwa kwe-insulin (secretogens):
- isenzo eside - okususelwa ku-sulfonylureas wesizukulwane sesibili nesesithathu: i-glycazide, i-glycidone, i-glibenclamide, i-glimeperide,
- isenzo esifushane (abalawuli be-prandial) - ama-glinides: i-repaglinide, i-nateglinide,
- thiazolidinediones: pioglitazone, rosiglitazone,
ukuvimbela ukumuncwa kwe-emathunjini we-carbohydrate: í-glucosidase inhibitors.
I-oral antidiabetesic monotherapy ngqo ithinta kuphela okukodwa kwezixhumanisi eziseqenjini lesifo sikashukela sohlobo 2. Ezigulini eziningi, lokhu kwelashwa akunikezeli ukulawulwa okwanele kwesikhathi eside kwamazinga kashukela, futhi kunesidingo sokwelashwa okuhlanganisa. Ngokusho kwe-UKPDS (R. C. Turner et al., 1999), i-monotherapy ngezidakamizwa ze-hypoglycemic yomlomo ngemuva kweminyaka emi-3 ukusuka ekuqaleni kokwelashwa yayisebenza kuphela ezigulini ezingama-50, kanti emuva kweminyaka eyi-9 kuphela yayingu-25%. Lokhu kuholela entshisakalweni ekhulayo kuma-regimens ahlukahlukene wokwelapha okuhlanganisiwe.
Ukwelapha okuhlanganisa kwenziwa uma kwenzeka ukwehluleka kwe-monotherapy nomuthi wokuqala wehlisela ushukela obekwe kudosi ephezulu. Kuyelulekwa ukusebenzisa inhlanganisela yezidakamizwa ezithinta imfihlo yokutholakala kwe-insulin kanye nokuzwela kwezicubu zepiseli esenzweni se-insulin.
Inhlanganisela yezidakamizwa enconyiwe:
sulfonylurea derivatives + biguanides,
i-sulfonylurea derivatives + i-thiazolidinediones,
glinides + biguanides,
glinides + thiazolidinediones,
biguanides + thiazolidinediones,
i-acarbose + noma yiziphi izidakamizwa ze-hypoglycemic.
Njengoba imiphumela yocwaningo ikhombisile, ukwehla okuphezulu kakhulu kwe-glycosylated hemoglobin ngesikhathi sokwelashwa okuhlanganiswa nemithi emibili yomlomo akudluli i-1.7% (J. Rosenstock, 2000). Ukuthuthuka okwengeziwe ekunxeshezelweni kwe-carbohydrate metabolism kungatholakala ngokusebenzisa inhlanganisela yezidakamizwa ezintathu noma ngokufaka i-insulin.
Amasu wokunquma ukwelashwa okuhlanganisa ungokulandelayo.
Ekuqaleni, ngesikhathi se-monotherapy nomuthi wokuqala wehlisela ushukela, uma kunesidingo, khuphula umthamo uze uphelele.
Uma ukwelashwa kungasebenzi, engeza kuyo umuthi welinye iqembu emgomweni wokulashwa ojwayelekile.
Ngokusebenza okunganele, ukuhlanganiswa kukhulisa umthamo womuthi wesibili kuze kube lapho.
Inhlanganisela yezidakamizwa ezintathu kungenzeka uma imithamo ephezulu kakhulu yangaphambili ingasebenzi.
Iminyaka engaphezu kwengu-30, amalungiselelo e-sulfonylurea abambe indawo esemqoka ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2. Isenzo sezidakamizwa zaleli qembu sihambisana nokukhushulwa kwe-insulin nokwanda kokujikeleza kwe-insulin, kepha ngokuhamba kwesikhathi balahlekelwa yikhono labo lokulawula ukusebenza kwe-glycemic kanye ne-β-cell function (J. Rachman, M. J. Payne et al., 1998). I-Metformin isidakamizwa esithuthukisa ukuzwela kwezicubu kwe-insulin. Indlela eyinhloko yokwenza kwe-metformin ihlose ukuqeda ukumelana kwe-insulin kwezicubu zesibindi kanye nokunciphisa ukukhiqizwa kweglucose ngokweqile yisibindi. I-Metformin inamandla okucindezela i-gluconeogeneis ngokuvimba ama-enzyme ale nqubo esibindini. Lapho kukhona i-insulin, i-metformin ikhulisa ukusetshenziswa kwe-glucose ye-peripheral ngokwenza kusebenze i-insulin receptor tyrosine kinase kanye nokudluliselwa kwe-GLUT4 kanye ne-GLUT1 (abathutha ushukela) kumaseli emisipha. I-Metformin ikhulisa ukusetshenziswa kwe-glucose ngamathumbu (ithuthukisa i-anaerobic glycolysis), ebonakala ngokwehla kwezinga le-glucose egazini eligeleza lisuka emathunjini. Ukusetshenziswa isikhathi eside kwe-metformin kunomthelela omuhle ku-lipid metabolism: kuholela ekunciphiseni kwe-cholesterol ne-triglycerides egazini. Indlela yokusebenza ye-metformin yi-antihyperglycemic, hhayi i-hypoglycemic.I-Metformin ayilinciphisi izinga le-glucose egazini ngaphansi kwezinga layo elijwayelekile, ngakho-ke, nge-metotherin monotherapy azikho izimo ze-hypoglycemic. Ngokusho kwababhali abaningana, i-metformin inomphumela we-anorectic. Ezigulini ezithola i-metformin, ukwehla kwesisindo somzimba kuyabonakala, ikakhulukazi ngenxa yokwehla kwezicubu ze-adipose. Umphumela omuhle we-metformin kuzakhi zegazi ze-fibrinolytic ngenxa yokucindezelwa kwe-inhibitor ye-plasminogen-1 activator.
I-Metformin isidakamizwa ekuphathweni kwayo kunciphisa kakhulu imvamisa yezinkinga ezinkulu zesifo sikashukela esenziwa ngezifo ezincanyana kanye nesifo sikashukela futhi sithinta isikhathi sokuphila kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Ucwaningo oluzokwenzeka e-UK (UKPDS) luveze ukuthi i-metformin yehlisa izinga lokushona kwabantu kwizimbangela ezihlobene nesifo sikashukela ngamaphesenti angama-42 kusukela ngesikhathi sokuxilongwa, inani labantu abashona ngo-36%, kanye nezinga lesifo sikashukela ngo-32% (i-IM IStratton, AL Adler et al., 2000).
Ukuhlanganiswa kwe-Biguanides kanye nokuphuma kwe-sulfonylurea kubonakala kunengqondo, ngoba kuthinta zombili izixhumanisi ze-pathogeneis zohlobo 2 lwesifo sikashukela: kuvusa ukuvikelwa kwe-insulin futhi kukhulisa ukuzwela kwezicubu kwe-insulin.
Inkinga enkulu ekwakhiweni kwamalungiselelo ahlanganisiwe ukukhethwa kwezakhi ezinomphumela wemvelo oyifunayo futhi ezinama-pharmacokinetics afanayo. Kubalulekile ukucabanga ngesilinganiso lapho izakhi ziphuma ezibhebheni ukuze kufinyelelwe ukugxila kwegazi okugcwele ngesikhathi esifanele.
Ithebhulethi ye-glucovans esanda kukhishwa, ukusebenza nokuphepha kwayo okufundwe kahle ocwaningweni olubanzi, oluhlelwe kahle lomtholampilo.
I-Glucovans ilungiselelo lethebhulethi lenhlanganisela, elifaka i-metformin ne-glibenclamide. Njengamanje, kufakwa izinhlobo ezimbili zemithamo yezidakamizwa eRussia, equkethe kwithebhulethi le-1: metformin - 500 mg, glibenclamide - 5 mg kanye ne-metformin - 500 mg, glibenclamide - 2.5 mg.
Kunobunzima obuthile bobuchwepheshe bokuhlanganisa i-metformin ne-glibenclamide kuthebhulethi eyi-1. I-Glibenclamide ayinyibiliki kahle, kepha igxiliwe kahle kusisombululo esipheshaneni lesisu. Ngakho-ke, i-pharmacokinetics ye-glibenclamide incike kakhulu kwifomu layo lomthamo. Ezigulini ezithola imicronicised futhi uhlobo olujwayelekile lwe-glibenclamide, inani eliphakeme lomuthi ku-plasma lalihluke kakhulu.
Ubuchwepheshe bokukhiqizwa kwama-glucovans buhlukile (S. R. Donahue, K. C. Turner, S. Patel, 2002): i-glibenclamide ngesimo sezinhlayiya zobukhulu obuchazwe ngokuqinile isatshalaliswa ngokulinganayo ku-matrix ye-metformin enyibilikayo. Lesi sakhiwo sinquma isilinganiso sokukhululwa kwe-glibenclamide singene egazini. Lapho uthatha ama-glucovans, i-glibenclamide ivela egazini ngokushesha kunalokho lapho kusetshenziswa i-glibenclamide njengethebhulethi ehlukile. Ukufezekiswa kwangaphambilini kwenani eliphakeme le-glibenclamide ku-plasma lapho uthatha ama-glucovans kukuvumela ukuthi uthathe umuthi ngokudla (H. Howlett, F. Porte, T. Allavoine, G. T. Kuhn, 2003). Amanani wokuhlungwa okuphezulu kwe-glibenclamide lapho uthatha isidakamizwa esihlanganisiwe ne-monotherapy ziyefana. I-pharmacokinetics ye-metformin, eyingxenye yama-glucovans, ayifani neye-metformin, etholakala njengesidakamizwa esisodwa.
Ucwaningo lokusebenza ngempumelelo kwama-glucovans lwenziwa emaqenjini eziguli angazange azuze ukulawulwa okwanele kwe-glycemic ngesikhathi se-monotherapy nge-glibenclamide kanye ne-metformin (M. Marre, H. Howlett, P. Lehert, T. Allavoine, 2002). Imiphumela yocwaningo lwe-multicenter ikhombisile ukuthi imiphumela emihle kakhulu itholakala emaqenjini eziguli ezithatha ama-glucovans. Ngemuva kwamaviki awu-16 ekwelashwa, amanani e-glucose e-HBa1c kanye ne-plasma glucose eqenjini leziguli athatha ama-glucovans anesilinganiso se-metformin + glibenclamide 500 mg / 2,5 mg okwehla ngo-1,2% no-2.62 mmol / l, ngokulandelana, ngesilinganiso se-metformin + glibenclamide I-500 mg / 5 mg ngu-0.91% no-2.43 mmol / L, ngenkathi kuseqenjini leziguli ezithatha i-metformin, lezi zinkomba zehle kuphela ngo-0.19% no-0.57 mmol / L, naseqenjini leziguli ukuthatha i-glibenclamide, ku-0.33% naku-0.73 mmol / L, ngokulandelana.Ngaphezu kwalokho, umphumela ophakeme wokulungiselela okuhlanganisiwe utholwe ngemithamo ephansi yokugcina ye-metformin ne-glibenclamide ngokuqhathaniswa naleyo esetshenziselwa i-monotherapy. Ngakho-ke, ukulungiselela okuhlanganisiwe, imithamo ephezulu ye-metformin ne-glibenclamide yayingu-1225 mg / 6.1 mg no-1170 mg / 11.7 mg (ngokuya ngesimo sefomu lomuthi), ngenkathi nge-monotherapy, imithamo ephezulu ye-metformin ne-glibenclamide yayingu-1660 mg no 13.4 mg Ngakho-ke, ngaphandle komthamo ophansi wezidakamizwa ezilwa nesifo sikashukela, ukusebenzisana kwe-metformin ne-glibenclamide, okusetshenziswe kwethebhulethi yokudidiyela, kunikeza ukwehla okukhulayo kweglucose yegazi kune-monotherapy.
Ngenxa yokungena ngokushesha kwe-glibenclamide kusuka kumuthi ohlanganisiwe iye egazini ngesikhathi sokwelashwa ngama-glucovans, ukulawula okusebenzayo kwamazinga kashukela ngemuva kokudla kutholakala ngokuqhathaniswa ne-monotherapy nezinto zayo (S. R. Donahue et al., 2002).
Ukuhlaziywa okwenziwe kabusha kukhombise nokuthi ama-glucovans anciphisa i-HbA1c ngempumelelo kunokuhlanganiswa okuhlangene kwe-glucophage ne-glibenclamide. Imiphumela yocwaningo ikhombisile ukuthi lapho kudluliswa iziguli kusuka ekusetshenzisweni okuhlangene kwe-glucophage kanye ne-glibenclamide ekuphathweni kwama-glucovans, ukwehla okukhulu kwezinga le-HbAlc kwabonwa (ngokwesilinganiso esingu-0.6%), futhi umphumela wawubizwa kakhulu ezigulini ezinenqanaba lokuqala le-HbA1c> 8%. Kwakhonjiswa nokuthi ama-glucovans avumela ukulawulwa okusebenzayo kakhulu kwezinga le-postprandial glycemia kunokusebenzisa okuhlanganisiwe kwe-glibenclamide kanye ne-metformin (S. R. Donahue et al., 2003).
Ukuboniswa kokuqokwa kwama-glucovans yilokhu: thayipha isifo sikashukela 2 kubantu abadala nokungasebenzi kwe-monotherapy yangaphambilini nge-metformin noma i-glibenclamide, kanye nokufakwa esikhundleni sokwelashwa kwangaphambilini ngezidakamizwa ezimbili: i-metformin ne-glibenclamide. Ukuthintana nokuqokwa kwe-metformin ne-glibenclamide nakho kusebenza njengokuphikisana kokuqokwa kwama-glucovans.
Izinkinga ezinkulu mayelana nokubekezelela ama-glucovans njengokulungiselela okuhlangene okuqukethe i-glibenclamide ne-metformin kuyizimpawu ze-hypoglycemia kanye nemiphumela emibi evela emgodini wesisu. Ukwehlisa umthamo wezidakamizwa ezingama-antidiabetic kunciphisa izehlakalo zemiphumela emibi. Imvamisa yokuphazamiseka kwe-hypoglycemia kanye ne-dyspeptic ezigulini ezazingazitholi ngaphambili izidakamizwa ezinciphisa ushukela lapho zithatha ama-glucovans zaziphansi kakhulu kunokusebenzisa i-monotherapy ene-glibenclamide ne-metformin. Ezigulini ezithola ngaphambilini i-metformin noma i-sulfonylurea, imvamisa yale miphumela emibi lapho ithatha ama-glucovans ngokuvamile yayifana nalapho i-monotherapy inezakhi zayo ngazinye. Imvamisa, izimpawu ze-hypoglycemia ngesikhathi sokwelashwa nge-glibenclamide (zombili i-monotherapy nangendlela ehlangene) zazibonakala ezigulini ezinenqanaba lokuqala le-HbA1c ngaphansi kuka-8.0 mmol / L. Kwabuye kwaboniswa ukuthi kubantu asebekhulile akukho ukwanda kwesigameko se-hypoglycemia ekwelashweni kwama-glucovans.
Ukunamathela kabi ezinconyweni zikadokotela kungenye yezingqinamba eziphambili ekwelashweni okuphumelelayo kweziguli ezinama-pathologies ahlukahlukene, kufaka phakathi isifo sikashukela sohlobo 2. Imiphumela yocwaningo oluningi ikhombisa ukuthi ingxenye yesithathu yeziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 enamathela ngokwanele ekwelashweni okunconyiwe. Isidingo sokuphuza izidakamizwa eziningana ngasikhathi sinye sithinta kabi ukuhambisana kwesiguli nazo zonke izincomo zikadokotela futhi kuthinta kakhulu ikhwalithi yokwelashwa. Ukuhlaziywa okubuyiselwe kwedatha ezigulini ze-1920 kudlulisiwe, kudluliswa kusuka ku-monotherapy ngomlomo nge-metformin noma i-glibenclamide kuya ekuphathweni kanyekanye kwalezi zidakamizwa noma kwi-metformin / glibenclamide ehlangene yezidakamizwa.Imiphumela yocwaningo ikhombisile ukuthi phakathi kweziguli ezisebenzisa umuthi ohlanganisiwe, irejimeni yokwelashwa ibonwa kaningi kakhulu kunaphakathi kweziguli ezidluliselwe ekuphathweni kanyekanye kwe-metformin kanye ne-glibenclamide (77% no-54%, ngokulandelana). Lapho bedlulisela iziguli zisuka kwi-monotherapy ngokushesha ziye kumuthi wokuhlanganisa, baqala ukuthatha isimo sokuzibophezela ngokwengeziwe ekuthini banamathele ekwelashweni (ukusuka kuma-71 kuye kwangama-87%).
Ama-Glucovans athathwe ngokudla. Umthamo womuthi unqunywa udokotela ngawodwana esigulini ngasinye - kuye ngezinga le-glycemia. Imvamisa, umthamo wokuqala ithebhulethi elilodwa lama-glucovans 500 / 2,5 mg ngosuku.
Lapho uthatha indawo yokwelashwa eyedlule yokudidiyela nge-metformin ne-glibenclamide, umthamo wokuqala ungamaphilisi ayi-1-2 ama-500 / 2,5 mg, ngokuya ngemithamo yangaphambilini ye-monotherapy. Umthamo ulungiswa njalo emavikini angama-1-2 ngemuva kokuqala kokwelashwa, kuya ngezinga le-glucose. Umthamo omkhulu wansuku zonke ngamathebulethi ama-4 ama-glucovans 500 / 2,5 mg noma amaphilisi ama-2 we-glucovans 500/5 mg.
Njengamanje, amalungiselelo ahlanganiswe nedosi elinqunyelwe le-metformin ne-sulfonylurea derivatives asethuthukisiwe futhi asetshenziswa ngenkuthalo (Ithebula 1). Omunye wale mishanguzo yi-glibomet, okuyinhlanganisela ye-glibenclamide (2,5 mg) ne-metformin (400 mg). Inkomba yokusebenzisa umuthi uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 nokungasebenzi kahle kokulashwa kokudla noma i-monotherapy ngemithi yomlomo ye-hypoglycemic. Uhlobo olunconyiwe lomuthi lubandakanya ekuqaleni umthamo owodwa wethebhulethi engu-1 ngosuku ngokudla, ngokukhethwa komthamo wesinyathelo ngesinyathelo. Umthamo ofanele ukubamba isikhathi 2 kwethebhulethi. Umthamo omkhulu wansuku zonke ngamathebulethi ama-4 - amaphilisi ama-2 izikhathi ezi-2 ngosuku. I-Glibomet yisidakamizwa sokuqala esidonsa ushukela esihlanganisiwe esibhaliswe eRussia. Imiphumela yezifundo zemitholampilo ifakazele ukusebenza kwayo okuphezulu, ukuphepha, ukubekezelela nokusebenzisa kalula iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 (M. B. Antsiferov, A. Yu. Mayorov, 2006). Ngasikhathi sinye, umthamo wansuku zonke wesigatshana ngasinye esakha umuthi waphenduka waba kabili ephindwe kathathu kunomthamo owasetshenziswa ngenkathi kwenziwa i-monotherapy yangaphambilini, futhi umphumela wokwehlisa ushukela wawuphezulu kakhulu. Iziguli ziphawule ukwehla kokudla, ukuqina kwesisindo, kanye nokungabikho kwezimo ze-hypoglycemic.
I-Glitazones (izinzwa) zibonisa isigaba esisha sezidakamizwa esandisa ukuzwela kwezicubu kwe-insulin futhi sifakazele sisebenza ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2 (Clifford J. Bailey et al., 2001). Imithi yaleli qembu (i-pioglitazone, i-rosiglitazone) iyinhlangano yamagciwane yokwenziwa kwama-receptors g enziwe yi-peroxisome proliferator (PPARg). Ukwenza kusebenze kwe-PPARg kushintsha ukuvezwa kwezakhi zofuzo ezibandakanyeka ezinqubweni ze-metabolic ezifana ne-adipogeneis, ukuhanjiswa kwesiginali ye-insulin, ukuthuthwa kweshukela (Y. Miyazaki et al., 2001), okuholela ekunciphiseni kokumelana kwezicubu esenzweni se-insulin kumaseli kwelitshe. Ezicubu ze-adipose, umphumela we-glitazones uholela ekuvinjelweni kwezinqubo ze-lipolysis, ekuqokeleleni kwe-triglycerides, okuholela ekunciphiseni kwezinga le-FFA egazini. Futhi, ukwehla kwamazinga e-plasma FFA kukhuthaza ukwenziwa kwe-glucose ukuthathwa yimisipha futhi kunciphise i-gluconeogeneis. Njengoba ama-FFA enomphumela we-lipotoxic kuma-β-cell, ukuncipha kwawo kuthuthukisa umsebenzi wokugcina.
Ama-Glitazones ayakwazi ukukhulisa ukubonakaliswa kanye nokudluliselwa kwe-glucose transporter ye-GLUT4 ebusweni be-adipocyte ekuphenduleni isenzo se-insulin, esivula ukusetshenziswa kweglucose ngezicubu ze-adipose. Ama-Glitazones athinta ukwahlukanisa kwama-preadipocytes, okuholela ekwandeni kwengxenye yezincane, kodwa ezizwela kakhulu imiphumela yamaseli we-insulin. Ku-vivo naku-vitro glitazones kunciphisa ukubonakaliswa kwe-leptin, ngaleyo ndlela kuthinte isisindo sezicubu ze-adipose ngokungaqondile (B.I-Spiegelman, i-1998), futhi nayo inengxenye ekuhlukanisweni kwezicubu ze-adipose ezinsundu.
Ama-Glitazones athuthukisa ukusetshenziswa kwe-glucose yemisipha. Njengoba kwaziwa, ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, kukhona ukwephulwa komsebenzi we-insulin-receptor phosphatidylinositol-3-kinase emisipha. Ucwaningo oluqhathanisayo lubonise ukuthi, ngokumelene nesizinda se-troglitazone therapy, umsebenzi we-insulin-ivuswe we-phosphatidylinositol-3-kinase wanda cishe izikhathi ezi-3. Ngokuphikisana nesizinda sokwelashwa kwe-metformin, azikho izinguquko emsebenzini walesi enzyme ezaqashelwa (Y. Miyazaki et al., 2003).
Imiphumela yocwaningo lwelabhorethi iphakamisa ukuthi ama-glitazones (rosiglitazone) anethonya lokuzivikela ngokumelene nama-β-cell, avimbela ukufa kwama-by-cell ngokwandisa ukukhula kwawo (P. Beales et al., 2000).
Isenzo se-glitazones, okuhloswe ngaso ukunqoba ukumelana ne-insulin nokwenza umsebenzi wama-β-cell, hhayi nje sikuvumela ukuthi ulondoloze ukulawulwa okugculisayo kwe-glycemic, kepha futhi kuvimbela ukuqhubeka kwesifo, ukwehla okuqhubekayo emsebenzini wama-β-cell kanye nokuqhubekela phambili kwezinkinga ezinkulu ze-macrovascular. Ngokusebenza cishe kuzo zonke izingxenye ze-metabolic syndrome, ama-glitazones anganciphisa ingozi yokuba nesifo senhliziyo.
Njengamanje, izidakamizwa ezimbili eqenjini le-thiazolidinedione zibhalisiwe futhi zivunyiwe ukuze zisetshenziswe: pioglitazone (actos) kanye ne-rosiglitazone.
Inkomba yokusetshenziswa kwama-glitazones njenge-monotherapy uhlobo lokuqala lwesifo sikashukela esitholakele olunezimpawu zokungamelana ne-insulin ngokudla okungasebenzi kanye nohlelo lokuzivocavoca.
Njengokwelashwa okuhlanganisa, ama-glitazones asetshenziswa lapho kungekho khona ukulawula okwanele kwe-glycemic lapho uthatha i-metformin noma i-sulfonylurea derivatives. Ukuze uthuthukise ukulawulwa kwe-glycemic, ungasebenzisa inhlanganisela kathathu (glitazones, metformin and sulfonylureas).
Inhlanganisela esebenzayo nefanele yama-glitazones ne-metformin. Zombili lezi zidakamizwa zinomphumela we-hypoglycemic ne-hypolipidemic, kepha indlela esebenza ngayo i-rosiglitazone ne-metformin ihlukile (V. A. Fonseca et al., 1999). Ama-Glitazones athuthukisa kakhulu ukuthathwa kwe-glucose encike kumisipha yamathambo. Isenzo se-metformin sihloselwe ukucindezela ukwakheka kwe-glucose esibindini. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ama-glitazones, hhayi i-metformin, angakhulisa umsebenzi we-phosphatidylinositol-3-kinase, ongomunye wama-enzyme aphambili wokuhambisa isignali ye-insulin, izikhathi ezingaphezu kwezingu-3. Ngaphezu kwalokho, ukungezwa kwe-glitazone ekwelashweni kwe-metformin kuholela ekuthuthukisweni okukhulu ekusebenzeni kwe-β-cell kuqhathaniswa nokwelashwa kwe-metformin.
Njengamanje, sekusungulwe umuthi omusha wokuhlanganisa - i-avandamet. Kunezinhlobo ezimbili zalo muthi ezinomuthi ohlukile we-rosiglitazone ne-metformin: i-rosiglitazone 2 mg ne-500 mg metformin ne-rosiglitazone 1 mg ngokuhlanganiswa ne-500 mg metformin. Uhlobo olunconyiwe ngamathebulethi ama-1-2 izikhathi ezimbili ngosuku. Umuthi awunamandla wokunciphisa ushukela kuphela uma uqhathaniswa nomphumela wengxenye ngayinye ngokwahlukana, kodwa futhi wehlisela umthamo wamafutha angaphansi. Ngo-2002, i-avandamet yabhaliswa e-United States, ngonyaka we-2003 - emazweni ase-Europe. Esikhathini esizayo esiseduze, ukubonakala kwaleli thuluzi eRussia kulindeleke.
Ukuhlanganiswa kwama-glitazones ane-sulfonylurea derivatives kuvumela umuntu ukuthi athathe isinyathelo kwezixhumanisi ezimbili eziyinhloko ku-pathogeneis yohlobo 2 lwesifo sikashukela: ukwenza kusebenze ukuvikelwa kwe-insulin (okuvela ku-sulfonylurea) kanye nokukhulisa ukuzwela kwezicubu esenzweni se-insulin (glitazone). Esikhathini esizayo esiseduze, ukubonakala kwe-avandaril yezidakamizwa ezihlangene (i-rosiglitazone ne-glimepiride) kulindeleke.
Kodwa-ke, njengoba kuboniswe yimiphumela yocwaningo olwenziwe ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 esathola i-monotherapy nge-sulfonylureas kanye ne-carbohydrate metabolism, ukungezwa kwe-rosiglitazone (avandium) kuholele ekwehlelweni okukhulu kwezinga le-HbA1c ne-glycemia amahora ama-2 ngemuva kokulayisha kwe-glucose (Ithebula 2).
Ngemuva kwezinyanga eziyi-6 zokwelashwa okuhlanganisiwe, isinxephezelo se-carbohydrate metabolism satholakala ku-50% weziguli (I.V. Kononenko, T.V. Nikonova, no-O. M. Smirnova, 2006).Ukuthuthuka kwesimo se-carbohydrate metabolism bekuhambisana nokwanda kokuzwela kwezicubu kuya esenzweni se-insulin endulin, kanye nokwehla kwe-basal kanye ne-postprandial hyperinsulinemia (Ithebula 3). Imiphumela yocwaningo lwethu ikhombisile ukubekezelela okuhle kokuhlanganiswa kwe-rosiglitazone ngamalungiselelo we-sulfonylurea.
Izinzuzo ezilandelayo zokwehliswa kweshukela okuhlanganisiwe ezinwebisela nge-sulfonylurea derivatives kanye ne-glitazones zingahlukaniswa ngokuqhathaniswa ne-sulfonylurea monotherapy kuphela:
isinxephezelo esihle kakhulu sesifo sikashukela ngokuqokwa ngesikhathi sokwelashwa okuxubile,
ukuvimbela ukukhula kwe-hyperinsulinemia, ukwehla kokumelana ne-insulin,
ukwenza umsebenzi we-β-cell - ngaleyo ndlela kufezekiswe amandla okubambezela ukudluliselwa ekwelashweni kwe-insulin.
Ngakho-ke, umgomo wokwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 ukufezekisa nokulondolozwa kokulawulwa okusebenzayo kwamazinga kashukela egazini, ngoba ubungozi bokuthuthuka nokuthuthuka kwezinkinga zesifo sikashukela sohlobo 2 kanye nokwanda kwesifo kuncike ngqo kwikhwalithi yokulawulwa kwe-glycemic kanye ne-HbA1c. Ukufeza isinxephezelo se-carbohydrate metabolism, i-algorithm elandelayo yokwelashwa kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ingahle ihlongozwe ngokuya ngezinga le-glycosylated hemoglobin (bheka i-Fig. 2). Ukwelapha okuhlanganisa kungenye yezinyathelo ezibalulekile ekwelashweni kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 futhi kufanele kusetshenziswe emazingeni aphambilini kunalokho okuvame ukubekwa, ngoba lokhu kukuvumela ukuthi uzuze ukulawulwa kwe-glycemic okusebenzayo kakhulu, kanye nokuthinta ngempumelelo i-metabolic syndrome. Ngaphezu kwalokho, amalungiselelo ahlanganisiwe nethamo elihleliwe lezinto zokwakha anezinzuzo eziningi.
Ngenxa yemithamo ephansi yokwelapha yemithi ehlanganisiwe, ukubekezelela kwabo kungcono futhi imiphumela emincane imbalwa ibonwa kune-monotherapy noma ngemithi ehlukile yemithi ehlanganisiwe.
Lapho uthatha izidakamizwa ezihlangene, kukhona ukuthobela okuphezulu, ngoba inani nemvamisa yokuphuza amaphilisi incishisiwe.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezihlangenewe kwenza ukuthi kunqume ukwelashwa kwezakhi ezintathu.
Ukuba khona kwemithamo ehlukahlukene yezidakamizwa eyakha umuthi ohlanganisiwe kwenza sikwazi ukukhethwa okuguquguqukayo okwengeziwe kwesilinganiso esifanele semithi ehlanganisiwe.
I-I.V. Kononenko, ukhetho lwezesayensi yezokwelapha u-O. M. Smirnova, udokotela wesayensi yezokwelapha, i-ESC RAMS, neMoscow
Izidakwamithi ezinciphisa ushukela wesibili - Izidakamizwa ezithoba ushukela zesizukulwane esisha.
Ukuze kulawulwe ukusebenza kwe-metabolism yesiguli enesifo sikashukela sohlobo 2 ngokunemba ngangokunokwenzeka, odokotela basebenzisa inhlanganisela yezidakamizwa ezikhethekile, ngasinye sazo “esishaya umgomo waso”. I-Actos® namanye ama-glitazones awandisi kuphela ukuzwela kwezicubu kwe-insulin, kodwa futhi kunciphisa izinga lokukhiqizwa kwe-glucose esibindini, futhi kunciphise nengozi yezinkinga zenhliziyo.
Lo ngumkhiqizo omusha wesigaba ezimbili osuselwa kuzakhi zezitshalo eziphephile. Esigabeni sokuqala, umphumela wokwelapha wenziwa kusetshenziswa umsoco wokudla, ukulungiswa kwendlela yokuphila, kanye nezinye izinqubo.
Imiphi imithi yesifo sikashukela engcono futhi esebenza ngempumelelo? Kulesi simo, umuntu uba nokukhuluphala, ikakhulukazi amahlombe, izingalo nesisu sikhula.
Umuntu udinga i-glucose njengamafutha, futhi akhiqizwa kusuka kuma-carbohydrate atholakala ngokudla futhi asatshalaliswa emzimbeni wonke ngosizo lwegazi. Futhi ukuze kwanelise iseli ngalinye amandla adingekayo, i-pancreas, eqala ukukhiqiza i-insulin, ifakiwe emsebenzini. Le hormone isiza noshukela.
Izinga loshukela elinganele alisongeli i-coma kuphela, kodwa futhi neqiniso lokuthi umphumela obulalayo ungavela.
I-Glypoglycemia yenzeka ngenxa kashukela onganele, ofakwa ekudleni, noma ngenxa yokukhiqiza kakhulu kwe-insulin.
Isifo sikashukela i-mellitus ihlukaniswe ngezinhlobo ezi-2:
Esokuqala yifomu elincike ku-insulin. Kulokhu, abantu abagulayo baphoqelelwa ukuthi bafake insulin ngezikhathi ezilinganayo ukuze bakwazi ukucubungula inani elilinganayo le-glucose. Umthamo unqunywa udokotela oya khona.
Ifomu elingathembekile le-insulin.
Uma kune-insulin eningi kakhulu, khona-ke isibindi sizama ukuthola ibhalansi ngokukhiqiza i-glycogen. Kepha uma ingekho lapho noma incane kakhulu, izidakamizwa zizokusiza.
I-Hypoclickimia ivela ikakhulu ngenxa:
umthamo obaliwe ngokungafanele we-insulin,
ukwehlisa ushukela wegazi, imvamisa ngemuva kokuphuza utshwala,
indlala ende, ukudla okungekuhle, kufaka nokudla,
ukusebenza ngokomzimba okuphezulu, okuholele ekungabikhona kwe-glucose ne-glycogen,
ukwelashwa ngezidakamizwa, okubandakanya izidakamizwa okunzima ukuzihlanganisa nezidakamizwa eziklanyelwe ukwelapha isifo sikashukela, isibonelo, i-Aspirin, i-Allopurinol.
Uma umuntu engenaso isifo sikashukela, khona-ke i-hypoglycemia ingadala noma yisiphi isifo esihambisana nohlelo lwe-endocrine.
Isimo se-hypoglycemia singaba nobunzima obu-3, bese kuthi ukwehla kwezinga likashukela, kube yingozi enkulu yezimpawu nezimpawu:
Inkomba ingezansi kobujwayelekile be-3.8 mmol / l, isicanucanu, ukwesaba, ukubanda kuqalwa, ukuzwakala kwezindebe noma iminwe kuzwakala - yindlela isigaba esinohlonze esibonakala ngayo.
Ngobunzima obulinganiselayo, kunzima ukugxila, imicabango idideka, umuntu uvutha kakhulu umoya. Ubuhlungu bekhanda buqala, iminyakazo yokunyakaza ilimale, kunzima ukukhuluma, kukhona ubuthakathaka obuqinile.
Isimo esibi kakhulu, lapho izinga likashukela lehlile lingaphansi kuka-2.2 mmol / l, lihambisana nokukhubazeka, ukwehluleka, ukubanjwa kwesithuthwane, nokuwa komthambo. Ukushisa komzimba kuncishiswa kakhulu. Imikhumbi ye-peripheral iqala ukubhidlika, okungaholela ekungaboni kanye ne-angiopathy.
Izidakamizwa ze-Hypoglycemic zisiza ukugcina umzimba ukuze ungawenzi ube yingozi kakhulu. Kubalulekile ukuqaphela ukuqala kwalesi sifo futhi uthathe izinyathelo eziphuthumayo zokusiqeda. Okusebenza kakhulu kuleli cala yi-glucagon. Umuthi yi-hormone efihla ama-pancreas, futhi iphinde ikhuthaze ukwakheka koshukela esibindini.
Uma umuntu onesifo sikashukela engadli noma edonsa, indlela ebambekile ukuphatha isixazululo se-Glucagon ngokungamakhambi, ngaphakathi noma ngokungagudli. Isebenza imizuzu engama-20, kuthi uma umuthi ube nomphumela wawo osebenzayo, ohlukunyeziwe kumele anikezwe ukudla ngama-carbohydrate okugaya ukudla.
Lapho le ejenti ingena emzimbeni, ifaka isandla ekwandeni kokugxilwa kwe-glucose, futhi kunenqubo yokwanda kwe-gluconeogeneis, okungukuthi, ukwakheka kwe-glucose esibindini.
Umuthi ukhulula izikhala, i-half-life yayo, lapho ingena kwi-plasma yegazi, isuka kwimizuzu emithathu kuya kwayi-6.
Hlanza amathumbu ngokushesha ama-anal
Ngenxa yokujwayelekile kokukhiqizwa kwe-insulin esigulini, isifiso sokudla ngokweqile siyancishiswa, okuwusizo kakhulu kwabanesifo sikashukela nalabo abakhuluphele noma abakhuluphele ngokweqile. Izidakamizwa ezokwehlisa ushukela zalolu hlobo zichazwe ezimweni ezilandelayo: Kwezinye izimo, ama-sulfonamides anqunywa ngokuhlanganiswa ne-insulin.
Izidakamizwa ezintsha ezinhle kakhulu zohlobo 1 nesifo sikashukela.
Izindlela zanamuhla zokwelapha isifo sikashukela sohlobo 2
Leli qembu lezimali lifaka uJanuvia, Galvus, Saksagliptin. kokuqukethwe Njengoba kunezidakamizwa eziningi kakhulu zokunciphisa ushukela wegazi, nginqume ukwethula kuwe. Ukuze kube lula kuwe, ngizokhombisa kubakaki igama lokuhweba elithandwa kakhulu, kepha khumbula ukuthi kunamanye amaningi.
Kuyisiko ukufanelekela ukuthola i-insulin, kuye ngokuthi isikhathi sokwenza nini, kube izinhlobo eziningana: Ukukhethwa komuthi ofanele, ukukhethwa komthamo kanye nohlobo lokwelashwa kwenziwa yi-endocrinologist. Ngakho-ke, nginqume ukwenza lokhu: Ngikhuluma kafishane ngomuthi othile bese nginike ngokushesha isixhumanisi sendatshana lapho konke kuchazwe khona ngokuningiliziwe.
Izidakamizwa ezihlikihla ushukela ezihlanganisiwe zilula ngokwedlula ukuthi umthamo wengxenye ngayinye uphansi kunalowo obuzowuthatha "ngawodwa." Landela isixhumanisi futhi uthole imininingwane eminingi nge-hypoglycemic.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela
Ungakuvumeli kanjani ukudideka ezinhlobonhlobo ezinjalo bese ukhetha izidakamizwa ezihlisa ushukela ezifanele? Ngalesi sizathu, umthamo obekwe udokotela kumele ubhekwe ngokuqinile futhi ungazinikezeli.
Kuyacaca ukuthi leyo mishanguzo ebekelwe ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 ayifanele ngokuphelele kwabanesifo sikashukela abangakhiqizwa i-insulin emzimbeni. Abamele ama-meglitinides angamalungiselelo eNovonorm ne-Starlix. Ngaphezu kwalokho, ezinye iziguli zithola ukukhuluphala kwesisindo.
Ake ngininikhumbuze, bangane, ukuthi umuthi ngamunye unegama lawo langaphandle lokuphathelene namanye amazwe, libizwa ngamafuphi ngokuthi INN. I-Starlix® iphephile ekusebenzeni kahle kwe-renal kanye ne-hepatic, ayiholeli ekuzuzeni isisindo futhi inciphisa ubungozi be-hypoglycemia.
Ukwelashwa Nokudla Kwesifo Sikashukela
Futhi vele ngonyaka ka 1923 lasakazeka emhlabeni wonke. Ngakho-ke, zibekezelelwa kangcono, zinemiphumela emibi embalwa kune-monotherapy noma lapho isifo sikashukela siphuza izidakamizwa eziningana ngokwahlukana.
Kepha kwezinye izimo, ngisho nokuthatha imishanguzo ngomlomo akusebenzi. Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zingahamba ngaphandle kokunciphisa amaphilisi ushukela isikhathi eside futhi zilondoloze amanani ajwayelekile eglucose kuphela ngokulandela ukudla okune-carb ephansi kanye nokuzivocavoca okwanele komzimba.
Thayipha abacindezeli besifo sikashukela sohlobo 2, uhlu lwamaphilisi
Izidakamizwa ezinciphisa ushukela we-Type 2 sikashukela
I-Metformin - izosiza ngesifo sikashukela
Isifo sikashukela e-USA siyelashwa, amaphilisi aseMelika kanye
Ukwelashwa Sikashukela - Uhlobo 2 Sikashukela Esinciphisa Izidakamizwa
Uhlobo 2 Sikashukela Sokwehlisa Izidakamizwa
Lesi sidakamizwa ngeke sehlise i-glucose ngaphansi kwezinga laso elijwayelekile lokuphila, futhi uma isiguli selashwa kuphela kuye, asisoze saba ne-hypoglycemia. Lesi sidakamizwa siyathengiswa kuze kube manje kuwebhusayithi esemthethweni yomenzi.
Umuthi wesifo sikashukela we-Trophic ulcer
Abamele Bright baleli qembu yiGlucobay neMiglitol. Kodwa-ke, lokhu akuyithinti kakhulu idatha ekusetshenzisweni kwale mishanguzo ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Ithebula 5 liveza idatha enanini leziguli ezake zathola umongo wesifo sikashukela oyisisekelo. Ngakho-ke, ama-inhibitors e-DPP-4 nama-agonists e-GLP-1 kancane kancane athatha indawo yawo ekwakhiweni kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Ingxenye ye-DPP-4 inhibitors kanye nama-agonists we-GLP-1 ekwelashweni kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ihlala ingasho lutho futhi ayidluli ku-0,2%.
Lesi sikhundla sinezizathu ezizwakalayo: njengoba isifo sikashukela sohlobo II singekho kuzo zonke izimo ezihlobene nokushoda kwe-insulin, ukukhiqizwa ngokweqile kwaleli hormone ngeke kusenze ncono isimo amangqamuzana anganqunyelwa kuso. INovonorm® idinga ukukhethwa komthamo, kepha, njengesidakamizwa esedlule, akubangeli i-hypoglycemia. Kusetshenziswa kokubili ku-monotherapy (lapho kusetshenziswa umuthi owodwa kuphela), futhi kuhlangene ne-metmorphine noma i-insulin.
Ngakho-ke, sizozama ukunikeza umbono ophelele wezidakamizwa ezidumile zesifo sikashukela bese siqala ngemithi esetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2. Lezi zinto manje ziyisidingo esibalulekile sokwanda kwenani leziguli ezinesifo sikashukela.
Ukwelashwa kwe-Glucagon kunqunywe uma:
kwehlisa ushukela wegazi
Ukwelashwa kokushaqeka ngokugula kwengqondo kuyadingeka,
njengosizo olusizayo ngesikhathi kutholwa isisu, amathumbu, indlela ye-radiological.
Kuyadingeka ukubuyisela i-glycogen esibindini kanye nokuvimbela i-hypoglycemia yesibili ngemuva kokuphathwa umuthi, udokotela unquma ama-carbohydrate.
Ngemuva kokuthi umuthi ungene emzimbeni, kungenzeka kube nemiphumela emibi ebangela ukungaphatheki kahle:
ukungahambi kahle komzimba ngesimo sokuqunjelwa, ukulunywa, okungatheni - i-angioedema,
Kunesigaba sabantu okungafanele siphathwe nge-glucagon. Umuthi uyaphulwa uma kukhona:
hypersensitivity kunoma yiziphi izingxenye zalo muthi,
Izinkinga ngezindlala ze-adrenal,
I-hypoglycemia yemvelo engapheli yemisuka ehlukahlukene, izimbangela zinqunywa udokotela oholayo.
Ngesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa, ukwelashwa nomuthi akukaluleki, kepha uma kunesidingo, khona-ke kungenzeka ukuthi kusetshenziswe kuphela ezimweni ezimbi kakhulu.
Le ejenti ye-hypoglycemic iyimpuphu evalwe ku-ampoule, futhi inezithako ezingeziwe ngokuya ngenani lomuthi: i-lactose, glycerin, phenol.
I-powder yomabili ifomu lomthamo owodwa ne-solvent, futhi isebenze kabusha. Kufanele igcinwe emazingeni okushisa angama-2-8 degrees Celsius futhi akufanele ishiywe ukukhanya kwelanga.
Isixazululo silungele ukusetshenziswa kuphela kungamahora angama-24. Umuthi wenzelwe ukusebenza ngokuphumelelayo, ngakho-ke uma umuntu elahlekelwe ukwazi ngenxa yokugula, kufanele avuke ngemuva kwemizuzu engu-5, kuthi emva kwemizuzu engama-20 akwazi ukugxila futhi aphendule imibuzo ngokusobala. Kepha uma isiguli singakabi ngcono, kuzodingeka umfonele udokotela, futhi ngokunokwenzeka, uzodinga ukufaka umjovo weglucose noma i-dextrose intravenous.
I-glucose kumele ibe khona egazini njalo, umuthi uyadingeka lapho kugxilwa. Izibhebhe ze-glucose zidonswa ngokushesha egazini, futhi umphumela wazo omuhle uqala ngokushesha ngenxa yokuthi azihambi ngezinqubo ezisesibindi. Kusekuqaleni kwesigaba sokuqala - lapho ingena emlonyeni - ingxenye kashukela ngokusebenzisa ulwelwesi lwe-mucous ingena egazini, futhi ingxenye esele esiswini namathumbu idonswa ngokushesha, futhi umphumela uyoba muhle kakhulu, njengoba ushukela wegazi ukhuphuka noma ngabe izinkomba ziphansi futhi nesimo sesiguli silethwa isilinganiso sokuthi amanyikwe awakhiqizi i-insulin, uma eluhlobo II lwesifo sikashukela, ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo I, i-insulin ngokuphelele ayikho emzimbeni.
Lapho ushukela ungehli ngaphansi kokujwayelekile, ushukela esigulini esinesifo sikashukela sohlobo II ngeke ube nomthelela omkhulu, ngoba i-pancreatic insulin iyakhiqiza.
Ubani onesifo sikashukela sohlobo lwe-I, ushukela, i-1 g yaso, uzonyusa ushukela ngo-0,28 mmol / l, kepha udinga ukubala inani elidingekayo ngokufanele.
IGlucose akhiqizwa hhayi kuphela ezibhebheni, kodwa futhi njengesixazululo soketshezi.
Leli fomu lidingeka kakhulu uma umuntu enesifo esilinganiselwe noma esinzima salesi sifo, futhi engakwazi ukugwinya umuthi.
Uhlobo olusebenziseka kalula lwe-glucose yi-gel, badinga ukugcoba izinsini nezihlathi endaweni yabo yangaphakathi, khona-ke isiguli esesimweni esibi ngeke sikwazi ukujaha, futhi ngemuva kwemizuzu engu-5 uzolulama.
Kuyadingeka ukuthi labo abanezinkomba eziphansi zoshukela bahlale benama-ejenti we-hypoglycemic kanye nabo, kanye nenothi exwayisa abanye ngalesi sifo nokuthi yini okufanele bayenze uma umuntu esifa ngenxa yokuhlaselwa yilesi sifo.